ပတ်စားနေတော့သည် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 28, 2021 Author admin	Comments Off on ပတ်စားနေတော့သည်
ကျွန်တော်က အရမ်းကြီးရုပ်ဖြောင့်ပြီး စမတ်ကျသူ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့လည်း အရမ်းရုပ်ဆိုးသူလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး ။ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်မှာဘဲ ကျောင်းက မာယာနှင့်ရည်းစားဖြစ်သွားကြပါတေ။ ရည်းစားသက်တမ်း ၂လမှာဘဲ သူနှင့်ကျွန်တော်ဟာ အချစ်ရေယဉ်ကြောမှာ စုန်မျောခဲ့ကြပြီးပါပြီဗျ ။…… အခုဆိုရင် သူနှင့်ကျွန်တော်ဟာ အကြိမ် ၁၀ ကျော်မျှ ချစ်ပြီးသွားကြပါပြီ ၊ အခုလည်း သူ့အိမ်က သူ့အမေရဲ့ အခန်းမှာ သူနှင့်ကျွန်တော်ဟာ အချစ်စခန်းဖွင့်ဖို့အတွက် သူက ကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ ညီလေးကို သူ့နုတ်ခမ်းလှလှတွေနှင့် စုပ်ယူနေပါပြီ ၊ အား… ကောင်းတေ.. အချစ်ရယ်… ညီးသံတွေ ထွက်လာတဲ့အထိကို သူကစုပ်ပေးတေ ၊ ကျွန်တော်က သူ့ရဲဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးပြီး သူ့ခေါင်းကို ထိန်းပေးကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးနေတုန်းမှာ အခန်းတံခါး ပွင့်လာပြီး မာယာအမေ ဝင်လာပါတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီကို အမြန်ဝတ်ပြီး အိမ်တန်ပြီး ပြေးတော့တေ။ အိမ်ရောက်တော့လည်း ခဏ္ဏအနားယူပြီး ရေချိုးထမင်းရင်း အိမ်က ဖုန်းခေါ်ကာ။
ကျွန်တော့အမေနှင့်အဖေကိုများ တိုင်မလား ထင်ပြီး စိုးရွံ့စွာနှင့် နားထောင်ပေမဲ့လည်း ဖုန်းခေါ်သံကို မကြားခဲ့ရပါဘူး၊ ကျွန်တော့အဖေက ပုသိမ်ကို အလုပ်ကိစ္စနှင့်သွားတော့ အမေကလည်း အလုပ်ကနေခွင့်ရတော့ သူတို့ဟာ ပုသိမ်မှာ အလုပ်ပြီးရင် ချောင်သာမှာ အပန်းဖြေဖို့ သွားကြပါတေ။ ကျွန်တော်က အပြင်မထွက်တာ တစ်ပတ်ကြာပြီလေ မာယာအိမ်ကနေ ပြေးလာကတည်းက ကျောင်းကပြန်လာရင် စာလုပ်ပြီး အိမ်မှာဘဲ နေပါတော့တေဗျ………. အိမ်တံခါးခေါက်သံကြားလို့ သွားဖွင့်တော့ မာယာအမေ ဒေါ်ကေသွယ်က မင်းအမေတို့ရှိလား မေးတော့ ကျွန်တော်က အမေတို့ ပုသိမ်သွားတေပြောတော့ သူက ဪဟုတ်လား ပြန်ပြောတော့ သူ့ကို အိမ်ထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါတေ။ သူကို ကော်ဖီ တိုက်တော့ သူကစပြီး မင်းက ငါ့သမီးကို မလုပ်ပါနဲ့ သူ့ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို သူလက်ထပ်တဲ့နေ့အထိ ယူသွားစေပါတေကွယ် မင်းလုပ်ချင်ရင် သမီးကိုစား အန်တီကိုဘဲလုပ်ပါ ဒေါ်ကေသွယ်က ဒီအတိုင်းပလိန်းကြီး ဒဲ့ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း လျှားရဟတ်လည်သလိုဘဲ ဖြစ်သွားတေ စဉ်းစားကြည့်လေ သူပြောပုံကို…။
ကျွန်တော့စိတ်မှာတော့ သူ့သမီးကို လုပ်တာ ၁၀ကြိမ်မကတော့ဘူး ၊ သူကသာ သူ့သမီးကို အပျိုစင်ထင်နေတာ ။… အခုလည်း သူ့သမီးကို အပျိုစင်အဖြစ် ထိန်ထားစေချင်လို့ သူက အစားထိုးပြီး လာကျွေးတာလေ ၊ဒေါ်ကေသွယ်ဟာ ကျွန်တော့အမေနှင့်က သူငယ်ချင်းတွေပါဘဲ အရပ်က ၅’၄” နို့ကြီးကြီး ဖင်ကြီးကြီးမှာ ခါးသေးတော့ သူ့ကို လူတွေက လမ်းလျောက်သွားတိုင်းငေးရတဲ့သူလေ။ သူ့အပြုံးကလည်း လူတွေစိတ်ကို ညှိနိုင်လွန်းလို့ အမည်ကြီးနေတာဗျ၊ အခုတော့ သူက ဒီလိုစကားပြောပြီး သူ့ရဲ့ဘေးတပ်ရင်ဖုံး အင်္ကျီနက်ပြာကို ချွတ်ပြီး သူ့ရဲ့ထမိန်အဖြူရောင်ကိုပါ တစ်ပါတည်း ချွတ်ကာ ခေါက်ပြီး ထိုင်ခုံပေါ်မှာ တင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့အနီးကိုတန်းပြီး လမ်းလျှောက်လာပြီး ကျွန်တော့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီး ညီလေးကို ကိုင်ကာ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဂွင်းထုပေးပြီး အနီရောင်နုတ်ခမ်းလေးနှင့် စုပ်ပေးပါတော့တေ….. ကျွန်တော့ရည်းစား သူ့သမီးတောင်မှ ညီလေးကို အဆုံးထိမစုပ်ပေးဘူး သူက လည်းချောင်းထဲထိရောက်အောင် စုပ်ပေးပါတော့တေဗျ၊ ဟိုနေ့က မင်းရဲ့ညီလေးကို မြင်လိုက်ရတာ အန်တီလေ မင်းညီလေးလို့ ကြီးတာကို မမြင်ဘူးသေးဘူးကွ….။
ပြောလည်းပြော စုပ်လည်းစုပ်ပေးပါတေ ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ဆံပင်တွေကို ထုံးဖွဲထားတဲ့ ဆံထုံးကြီးကိုကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်ပေးပြီး ၁ မိနစ်ကြာကြာ စုပ်ပေးတဲ့သူ့ကို ကော်ဖီစားပွဲပေါ်မှာ တင်ပေးပြီး သူ့နှင့်နုတ်ချင်းနမ်းကာ သူ့နို့သီးခေါင်းကို ချေပေးလိုက်ပါတေ ၊ သူကလည်း ညီလေးကိုကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးပါတေ။ ကဲ့ လုပ်တော့ကွယ် အန်တီ လိုချင်ပြီ ပြောလာတော့ သူ့ရဲ့တိုတိုလေးဖြတ်ထားတဲ့ အမွေးတွေကို ကစားနေတာ ရပ်လိုက်ပြီး ညီလေးကိုကိုင်ပြီး သူ့ညီမလေးအထဲကို မသွင်းခင်အပေါ်အောက် သုံးချက်ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တေ ၊ သူ့ညီမလေးကလည်း အရည်တွေရွှဲလာတာ သိတော့ ပထမဖြေးဖြေးလေး သွင်းလိုက်ပါတော့တေ ၊ အား… အန်တီယောက်ျားဆုံးပြီးတဲ့ ဒီငါးနှစ်မှာ ဒီလိုမျိုး ဘယ်ယောက်ျားနှင့်မှ မလုပ်သေးဘူးကွယ်..အား…ရှီး… လို့ ညီးကာပြောလာပါတေ ၊ တကယ်လည်း သူ့ရဲ့ညီမလေးက အရမ်းကို တင်းကြပ်နေတာများ အချို့သော အပျိုခံယူထားတဲ့ အပြိုတွေထက်ကို ပိုကျပ်နေတာဗျ ။ သူ့သမီးလည်း သူ့လိုဘဲ ကျပ်တည်းတာပါဘဲ ဒါပေမဲ့ အန်တီကေသွယ်က ပိုကျပ်တေလို့ ထင်မိတေဗျ။
သူ့ကို ၅ မိနစ်ကြာ လုပ်ပြီးသူက လည်ပင်းကိုတင်ကျပ်စွာ ဖက်ထားပြီး အန်တီ ပြီးချင်လာပြီကွယ်..အား.. မြန်မြန်..လုပ်.. လုပ်ပေးပါကွယ်…အား….. ရှီး..အား…မြန်မြန်…အာ.. နားမှာကပ်ကာ ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး ကော်ဖီစားပွဲမှာထိုင်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီး အမြန်ဆောင့်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တေ။ သူနှင့်ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပြီးသွားတော့ ဖက်ပြီး ညီလေးကိုမထုတ်ဘဲ မှိန်းနေလိုက်ပါတော့တေ…. အမောပြေလို ကျွန်တော်က ထိုင်ခုံမှာထိုင်တော သူကကော်ဖီစားပွဲပေါ် ထိုင်နေတာက ဆင်းရပ်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်သားပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အချစ်ရည်တွေက သူ့ခြေထောက်မှာ စီကျလာပါတော့တေ ၊ သူက သူ့ရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် ကျွန်တော့ကိုကျောခိုင်ကာ အချစ်ရည်ကို သုတ်လိုက်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်ကာ မျက်လုံးတစ်ဘက်မှိတ်ပြပြီး…. မင်းက သမီးကိုလုပ်ချင်ရင် သမီးအစားအန်တီကို လာရှာပါ အန်တီက သမီးအစား မင်းနှင့်လုပ်ပေးပါ့မေ အန်တီလိုချင်ရင်လည်း မင်းကို လာရှာမှာပါ မင်းလိမ္မာရင်တော့ အန်တီက အဆင်သင့်ဘဲ ပြောလာတော့။
ကျွန်တော့ကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် လုပ်အောင်လို့ မြူစွယ်နေပုံရောက်နေတော့လည်း ကျွန်တော်ထိုင်ရာကထသွားပြီး သူ့ရဲအနောက်မှာ ရပ်ကာ ခေါင်းထောင်လာတဲ့ ညီလေးကိုကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီမှာ တေ့ကာ အဆုံးထိရောက်အောင် ဖြေးဖြေးလေး သွင်းပေးလိုက်ပါတော့တေ……. သူ့ကိုနောက်ကနေဖက်ကာ သူ့ကိုအခန်းနံရံပေါ်မှာ လက်ထောက်စေပြီး သူ့နို့သီခေါင်းလေးတွေကိုချေကာ ဆောင့်ဆောင့်ကာလုပ်ပါတော့တေ ၊ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို ညီလေးရဲ့တွဲဖက်ဥတွေက တဖတ် .. ဖတ်.. နှင့် ရိုက်ပေးတော့ သူလည်းကောင်းသလို ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကို အကောင်းကြီးကောင်းနေတော သူက အား… သမီးအစား… အား… အမေကိုလုပ်ပေးနေတော့ ကြားထဲမှာ အား… ရှီး… မင်းက.. အား.. အရှုပ်ထုတ်တွေ အား…. မရှိတော့ဘူးပေါ့..ကွယ်..အား… ရှီး…. မင်းနှင့်သမီး.. အား…ကို..အန်တီ.. သဘောတူတေ..အား… ကျောင်းပြီးမှ အား… မင်းတို့နှစ်ယောက်..အား.. လက်ထပ်ကြပါ..အား… သူက ပြောလည်းပြောပြီး ခေါင်းလှည့်ကာ နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းလာပါတော့တေ ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုနမ်း နို့တွေကိုချေကာ။
အနောက်ကနေ မြန်မြန်လုပ်ကာ နှစ်ယောက်သား နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပြီးသွားကြပါတေ၊ သူနောက်ကနေဖက်ပြီး နံရံမှာကပ်ပြီးမှိန်းနေကြတာ အိမ်မြှောင်နှစ်ကောင် အတိုင်းပါဘဲဗျာ၊ အမောပြေတော့ သူလည်း အဝတ်အစားတွေဝတ်ကာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေ ပြန်သွားပါတေ……..အန်တီကေသီပြန်သွားတော့ တလှမ်းချင်းတိုင်းမှာ တုံခါပြီးရမ်းပြနေတဲ့ဖင်ကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်စွာ ပြုံးမိပါတေ။သူပြောစကားလေးက မင်းသမီးကို လုပ်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်း အန်တီကို လာရှာပါ အန်တီကိုဘဲ လုပ်ပါ လို့သူက မျက်လုံးတစ်ဘက်မှိတ်ပြကာ ပြောတာကို သတိရမ်သွားပါတေ။ အားရှိအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲက နွားနို့နှင့်ကြက်ဥကို ယူသောက်လိုက်ပြီး တီဗွီကြည့်ရင်း တနေ့တာကို ကုန်ဆုံးလိုက်ပါတေ။ နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာ ကျွန်တော့မိဘတွေ ပြန်ပြီး ရောက်လာကြပါတေ။ သူတို့က ပုသိမ်မှာဘဲ အလုပ်ကို ပြောင်းပြီး အိမ်ကိုလည်း ငှါးထားခဲ့မေ ။ ကျွန်တော့ကို ဦးလေးတို့အိမ်မှာ နေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးပြီး သူတို့လည်း ပုသိမ်ကို ပြန်သွားကြပါတေ။ ဦလေးဆိုပေမဲ့ အဖေ့ရဲ့ညီ နှစ်ဝမ်းကွဲလား သုံးဝမ်းကွဲလားတော့ မသိတော့ပါဘူးဗျာ။
ဦလေးမိန့်မ ဒေါ်လေးငယ်က ကျွန်တော့အမေရဲ့ သူငယ်ချင်း အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူတွေ ဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်တာကို လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး သဘောတူတာပေါ့ဗျာ…….. ကျွန်တော်လည်း အိမ်မှာလူမရှိတုန်း ဖုန်းနှင့် အန်တီကေသွယ် ကိုချိန်းထားတာ သူ့အလုပ်ကို သွားလိုက်ပါတေ ။ သူက ကုမဏ္ဏီမှာ မန်နေဂျာမကြီး တစ်ယောက်ပါ သူရုံးခန်းကို ဝင်လိုက်တော့တေ ။ အန်တီကေသွယ်က သူ့ရုံးဆင်းချိန်မို့ ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေရာကနေ ထလာပြီး ကျွန်တော်ကိုဖက်ပြီး အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်း စပြီးနမ်းလာတေ။ သူ့ရဲ့တင်းပါးကို ကိုင်ကာဆုပ်နယ်ပေးပြီး နုတ်ခမ်းကိုပြန်ပြီး နမ်းလိုက်တော့ သူ့ညီက ညီသံလေး ထွက်လာတော့တေ။ ညီလေးကလည်း သူ့ညီမလေးကို ထောက်နေပြီလေ သူက အင်း.. မင်းမခေါ်ရင်တောင်မှ အန်တီက မင်းကို ခေါ်တော့မလို့ကွ မင်းဃော်တော့ အိုကေသွားတေ လို့ပြောပြီး သူ့ရဲ့အခန်းက ဧည့်သည်တွေကို တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောတဲ့ ဆက်တီပေါ်ကို တွန်းချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့ ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီး ညီလေးကို စတင်ပြီးစုပ်ပေးပါတေ။.. သူကစုပ်ပေးတာကို ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့သူရဲ့ကုမဏ္ဏီဝတ်စုံကို တလွှာချင်းဘဲ ချွတ်ပြတေဗျ။
အင်္ကျီကလိမ္မော်ရောင် ထမိန်က အနက်ရောင်လေးကို ချွတ်ပြီး ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့အပေါ်မှာ တွက်ခွပြီး ညီလေးကိုကိုင်ပြီး ညီမလေးနှင့် ချိန်ပြီး ဖြေးဖြေးလေးထိုင်ချလိုက်ပါတေ။ အား. ဆိုတဲ့ ညီသံလေးထွက်ကာ အဆုံထိအောင် သွင်းလိုက်ပြီးမှ ခဏ္ဏလေး အပေါ်ကနေ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီ နေလိုက်တေဗျ ။ သူလည်းဘဲ ညီလေးကိုညီမလေးနှင့် အသားကျတောမှ စတင်ကာထိုင်ထ မြန်မြန်လုပ်ပေးပါတော့တေဗျ။ ဆက်တီခုံဆော်ဖာတွေကလည်း သူ့ရဲ့အပေါ်လုပ်တဲ့ဟန်နှင့်ကို တန်ပြန်လုပ်ပေးနေတော့ ကျွန်တော်က သူ့နို့တွေကိုကိုင်ပြီး အောက်ကနေမှိန်းနေတော့တေ ၊ သူလည်း ၅ မိနစ်လောက်ပြီးမှာ သူက အန်တီပြီးချင်ပြီကွာ မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ လို့တောင်းဆိုလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆက်တီပေါ်မှာ လက်ထောက်စေပြီး အနောက်ကနေ သူ့ကိုအမြန်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်ပါတေ ။ကျွန်တော်ဆောင့်လုပ်တိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ တင်ပါးကြီးနှစ်ခု တုန်ခါနေတာများ စိတ်ကိုပိုထန်စေတာပေါ့ဗျာ။ သူ့ကိုအနောက်ကနေ အချက် ၅၀ ဆောင့်လုပ်ပေးပြီး သူနှင့်အတူ ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတော့တေ…….။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်း ဆက်တီပေါ်မှာ အနားယူပြီးမှ ဆက်တီပေါ်မှာပေနေတဲ့ အချစ်ရည်တွေကို အန်တီကေသွယ်က သုတ်လိုက်ပြီး နောက်ထပ်လုပ်ချင်သေးလား မေးလာတော့ လုပ်ချင်တေလို့ပြောပြီး ပြီးသွားပေမဲ့ သိပ်ပြီး ခေါင်းမငိုက်သေးတဲ့ ညီလေးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ ဆွပြီး သူ့က ကုံးပြီးအရည်တွေ သုတ်နေတဲ့ သူ့နောက်ကိုဝင်ပြီး အနောက်ကနေ သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပြီး သူ့ကို ဆက်လုပ်တေ သူကလည်း နောက်ပြန်ကော့ကာ ပြန်ဆောင့်ပေးလာပါတေ။ သူကလည်းထန် ကျွန်တော်ကလည်း သန်တော့ တွေ့ပြီလေဗျာ၊ အများသူငါ သွားရည်ယိုနေတဲ့ အိုးကောင်းတဲ့အန်တီကို လုပ်ရတာ အရမ်းကောင်းတေ ။ သူကလည်း ညီးသံလေးနှင့် နောက်လှည့်ကြည့် မျက်လုံးတွေ မှေးပြီး အရမ်းကောင်ပါတေ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလုပ်ပြတေ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြိမ်မှာ ၁၀ မိနစ်လောက်လုပ်ပြီး ပြီးသွားတေ။ သူ့က ကျွန်တော်ကို ကြည့်ပြီး အမလေး သမက်ယောက်ျားရယ် စွဲသွားပြီကွယ် လို့ပြောပြီး အမောဖြေနေတဲ့ ကျွန်တော့ကိုပါးတွေနှင့် နဖူးကို နမ်းကာပြောလာတော့တေ ။ ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်လုပ်ပြီး အဝတ်စားတွေ ပြန်ဝတ်ကာ သူ့ကားနှင့်အတူဘဲ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတေ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှာ အန်တီနှင့်အတူ အမေရဲ့သူငယ်ချင်း ဒေါ်ဖြူဖြူရောက်နေတေ ။အိမ်နောက်မှာ စကားပြောနေတဲ့သူတို့ဆီ သွားလိုက်တော့ လမ်းခုလတ်မှာ ရပ်သွားရတေဗျ။ သူတို့ပြောနေတာ ကျွန်တော့ဦးလေး တစ်ဝမ်းကွဲရဲ့အကိုက ညီရဲ့မိန့်မနှင့် လုပ်ကြတာကို ပြောနေကြတော့ ရပ်ပြီး စောင့်ကာနားထောင်နေလိုက်တေ။ဒေါ်လေးက ဟေ့.. ဖြူဖြူ ကိုဘကြိုင်က မင်းနှင့်ငါ့ကို တပြိုက်နက်တည်း နှစ်ယောက်တစ်ယောက် လုပ်ချင်တေ လို့ ငါ့ကိုပြောခိုင်းတေကွ အဲ့ဒါ မင်းဘယ်လိုလဲ မင်လည်း သိသားဘဲကွာ ကိုဘကြိုင် လုပ်ပေးတာက အရမ်းကောင်းတာကို သူတို့ပြောတာကို ကြားတော့ ဒေါ်ကေသွယ်ကို ၂ ချီလုပ်လာတဲ့ ညီလေးက ပြန်ပြီး ခေါင်းထောင်လာတော့တေ………. ဒေါ်ဖြူဖြူက ယောက်ျားပန်းနာသည်ကြီး သိပ်လုပ်မပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွတ်လို့ရပေမဲ့ ဦးလေးက လုပ်ပေးနေတာတောင် ဒေါ်လေးငယ်က ဘာလို့ ဖောက်ပြန်တာလဲ စဉ်းစားမရဘူးဗျ၊ ဒေါသလည်း ထွက်မိတေ ဒေါ်ဖြူဖြူက ကျွန်တော့ထက် အရပ်နည်းနည်းပိုရှည်တေဗျ ၊ သူ့ဘော်ဒီက အပိုအလိုမရှိ နို့တွေကမကြီးမငယ် ခါးသေးပြီး အနောက်စူပြီးကော့နေတဲ့။
သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကို မြင်တိုင်ဘဲ သရေကျမိတေဗျ ။ ဒေါ်လေးငယ်က ဗိုက်ခေါက်နည်းနည်းထွက်ပေမဲ့ နို့တွေတင်တွေက မကျသေးဘူးလေ။ ဒေါ်လေးငယ် ပြောတဲ့စကားတွေကို မှတ်ထားလိုက်တေဗျ၊ သူက သူက မနက်ဖြန် ကိုဘမောင်က အလုပ်နှင့်ခရီး နှစ်ရက်ထွက်မေ အောင်ဇော်က ကျောင်းသွားရမေ သူတို့မရှိအချိန်မှာ ငါချိန်းလိုက်မေ ပြောနေတာကို ကြားခဲ့ပြီး အိမ်အပြင်ကို ပြန်ထွက်ကာ အိမ်ရှေ့ကနေ အပြင်က ပြန်လာသယောင်နှင့် အိမ်ထဲကို လှမ်အော်ပြီး ဒေါလေးရယ် ဗိုက်ဆာတေဗျ ပြောကာ ဝင်သွားလိုက်တော့ ဒေါ်ဖြူဖြူက အောင်ဇော်လေး ပြန်လာပြီးလားကွ လို့ နုတ်ဆက်တော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒေါ်လေးလို့ ပြန်ပြောပြီး စားပွဲမှာ ဝင်ထိုင်ပြီး ဒေါ်လေးက ကော်ဖီချပေးတာကို သောက်ပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူရဲ့နို့တွေကို ချိုးကြည့်ကာ ကော်ဖီသောက်ပြီး မနက်ဖြန်အတွက် အစီစဉ်ချပြီး အိပ်စက်လိုက်ပါတေ…… နောက်နေ့မနက်မှာ ဦလေးဦဘမောင်က အလုပ်နှင့်နယ်ကို ခရီးထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့တို့အိမ်မှာ တပ်ထားတဲ စီစီတီဗွိ ဖြုတ်ယူကာ ကျွန်တော့ရဲ့အခန်းမှာ တပ်ထားခဲ့တေ အဲဒီ ဟာ လေးကို ဖြုတ်ပြီး ဒေါလေးချက်ပြတ်နေတုန်းမှာ။
သူ့တို့လင်မယား အခန်းကိုဝင်ပြီး ခိုးတပ်ထားလိုက်တေ။ကျွန်တော့ရဲ့ ကျွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ကာ ထားခဲ့ကာ ကျောင်းကိုသွားမေလို့ ပြောကာ အိမ်ကနေပြီး ကျောင်းသိုလာခဲ့တေ စာသင်ပြီးမှ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တော့ နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ပွဲက မပြီးသေးတာနှင့်ကြုံတော့ ဦးဘကြိုင်က သူ့အဝတ်အစားတွေကို အမြန်ဝတ်ပြီး ကျွန်တော့ကို ဘာမှမပြောဘဲ အမြန်ဘဲထွက်သွားတေ……. မိန့်မနှစ်ယောက်ကတော့ ရှက်ပြီး အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ပြီး သူတို့ယောက်ျားတွေကို မပြောဖို့ ဖြောင်းဖျကြတေ။ ကျွန်တော်လည်း နဂိုကတည်း ဒေါ်ဖြူဖြူကို လုပ်ချင်တာ ကျွန်တော်ကလည်း သူတို့ကိုကြည့်ပြီး အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်ပြီး သူတို့ကို ကျွန်တော်က ကျွန်တော်လည်း လုပ်ချင်တေဗျ ကျွန်တော်မလုပ်ရရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြောင်းကို ပြောမှာဘဲလို့ ပြောလိုက်တေ ဒေါ်လေးငယ်က ကျွန်တော့ညီလေးကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူကိုကြည့်ကာ ကြီးလိုက်တာကွာ အားရစရာနော် ဖြူဖြူ လို့ပြောလိုက်တေ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူက ကြောင်ပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကိုဘဲ မှင်သက်စွာကြည့်နေကာ အင်း…ဟုတ်တေ ဖြေလိုက်ပါတေ။
ဒေါ်လေးငယ်က ကျွန်တော်ဆီကို လျှောက်လာပြီး ညီလေးကို ဆွပေးပြီး နုတ်ခမ်းနှစ်ခုဟလာကာ ညီလေးကို စုပ်ပေးပါတေ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူလည်း ကျွန်တော့ဆီကို လျောက်လာပြီး ဒေါ်လေးနည်းတူဘဲ ညီလေးကို ရှေ့မှာမျက်နှာကပ်ပြီး အနီးကပ်ကြည့်နေတောတေ၊… ဒေါ်လေးက သူစုပ်ပေးတာကိုရပ်ပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူကို တစ်လှည့်စုပ်စေကာ သူရဲ့ ရင်သျားထားတဲ့ထမိန်ကို ဖြေချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို ပါးတွေကိုနမ်းပြီး ကျွန်တော့ရဲ့နားရွက်ကိုနုတ်ခမ်းလေးနှင့်ငုံပြီ လုပ်ပေးတော့ စိတ်ကလည်း အရမ်းကြွလာပြီး ဒေါ်လေးငယ်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်ချလိုက်ကာ ဒေါ်ဖြူဖြူ စုပ်ပေးတာကို ရပ်ခိုင်းကာ ဒေါ်လေးငယ်ကို လေးဘက်ထောက်စေပြီးမှ သူ့အနောက်နေ ညီလေးတေ့ပြီး တစ်ချက်တည်းနှင့် အဆုံးထိ ရောက်အောင် ပြင်းပြင်းလေး ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တေ။….. အား… သားရယ်.. အရမ်းကြီးဘဲကွာ အောင့်သွားတေ အား… ကျွတ်.. ညီးသံလေးနှင့်ပြောပေမဲ့လည်း နာကျင်လို့အော်တာမဟုတ်ဘဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ ပုစံမျိုးနှင့် ပြောလာတော့ စိတ်ကိုပိုပြီးထန်စေကာ သူ့ကို မညှာတော့ဘဲ သူရဲ့ ခါးကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါတေ။
ဘေးကနေကြည့်နေတဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူကိုဆွဲကာ နုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်ပါတေ။ဒေါ်ဖြူဖြူကလည်းလျာလေး ထိုးသွင်းကာ တုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတေ၊ ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်လေးကို ၃ မိနစ်ကြာ လုပ်ပြီး ဒေါ်ဖြူဖြူကိုလည်း ဒေါ်လေးနှင့်ဘေးချင်းယှဉ်ကာ ဒေါ်လေးလိုဘဲ လေးဘက်ထောက်စေပြီးဒေါ်လေးလိုဘဲ ညီလေးကိုတေ့ကာ သူညီမလေး အထဲ့ကို အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းပြီး ဆောင့်လုပ်ပါတော့တေ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူရဲ့ညီမလေးက အရမ်းကျပ်တေဗျ သူက ကလေးမွေးတာတာင် ခွဲမွေးထားတော့ အရမ်းကြီး မကျယ်သေးဘူး ဦးဘကြိုင်ရဲ့ညီလေးကလည်း ကျွန်တော့ထက်ငယ်တာတော့ ကျွန်တော်က ကျပ်ကျပ်လေး လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ သူကလည်း ငတ်မွတ်နေသူမို့သာ ကျိတ်ခံနေတာ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ပေးကာ သူကောင်းလာတော့မှ အရှိန်မြင့်ပြီး မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်လိုက်တော့ ဒေါ်ဖြူဖြူကာ လက်နောက်ပြန် ကျွန်တော့တင်ပါးကို ကိုင်ပြီး… ဖြူ ပြီးတော့မေ အား… မြန်မြန်…အား.. တောင်းဆိုတော့ ပိုပြီးဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတေ ။ ကျွန်တော်က နောက်ထပ် အချက်၂၀ ထပ်လုပ်ပြီး သူ့ဆီမှာအချစ်ရည်တွေပန်းပြီး ပြီးသွားတေ။
ဒေါ်ဖြူဖြူအပေါ်မှာ ပူးကပ်ပြီး အမောဖြေလိုက်တေ။ ဒေါ်လေးငယ်နှင့်ဒေါ်ဖြူဖြူက ပထမတော့ သူတို့ရဲ့ ယောက်ျားတွေသိမှာစိုးလို့သာ ကျွန်တော်နှင့်လုပ်ကြတာ နောက်တော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါလက်ပါနှင့်ကို အချစ်လမ်းကို အတူလျှောက်လှမ်းကြတာ ဒေါ်လေးငယ်က သားရယ် မင်းအလိုရှိတိုင်ဘဲ ဒေါ်လေးတို့နှစ်ယောက် အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ပါဘဲကွယ် လို့ ပါးကိုနမ်းကာ ပြောလာတော့တေ ။ ကျွန်တော်ကလည်း အန်တီတို့ကို ဟိုဦးဘကြိုင်နှင့် ထပ်ပြီးလုပ်ရင်တော့ ကျွန်တော် တိုင်မှာဘဲဗျ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူကကော့ ဦဘကြိုင်နှင့် ထပ်ပြီး လုပ်ချင်သေးလား ကျွန်တော်မှာ ဗွိဒီယို ရိုက်ထားတာတွေ ရှိတေနော် လို့ပြောလိုက်တော့ ချက်ချင်းဘဲ အလန့်တကြား မလုပ်တော့ပါဘူးကွယ် အန်တီယောက်ျားမှာ ရောဂါတွေ ဆိုးလာပြီး အန်တီရဲ့စိတ်တွေကို အလိုလိုက်ပြီး ၂ ကြိမ်ဘဲ လုပ်ဘူးတာပါကွယ် ပြောလာတော့ ကျွန်တော်ကလည်း …. ဒါဆိုရင် အခုကျွန်တော်ရှိပြီ အခြားသူတွေနှင့် မလုပ်ရဘူး တွေ့ရင်တော့ ဗွိဒီယို ဖိုင်ပွပြီးနော် ခြိမ်းခြောက်ပြီး ပြောပေမဲ့ စိတ်ကတော့ သနားမိတေဗျ။
သူကလည်း နောင်မလုပ်တော့ဘူး ပြောလာတော့မှဘဲ သူ့ရဲ့ညီမလေးအထဲကနေ မထုတ်သေးတဲ့ ညီလေးက ပြန်ပြီး ခေါင်းလှုပ်ရှားလာတော့ သူ့ခါးကိုကိုင်ကာ စတင်ပြီး သူ့ကိုဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တေ။ အရည်တွေရှိနေလို့ အသွင်းအထုတ်တိုင်းမှာ အသံတွေ ထွက်နေတော့ အန်တီဖြူကို လုပ်ပေးတာကို ရပ်လိုက်တော့ သူကအလိုက်တသိနှင့် သူ့ရဲ့ညီမလေးကို ဘေးက ဒေါ်လေးရဲ့ ထမိန်နှင့်သုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကိုလည်းဘဲ သုတ်ပေးပါတေ။ သုတ်ပြီးမှ ဘေးကဒေါ်လေးငယ်ကို ဆွဲပြီး ပက်လက်အနေအထား ပြင်ပေးကာ သူ့အပေါ်ကနေမှောက်ချပြီး ညီလေးကိုတေ့ကာ အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်ပြီး သူ့အပေါ်က လက်ထောက်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပြီးလုပ်လိုက်တေ၊ အား… သားရယ်… မင်းရှိနေလို့ကတော့..အား…. ဒေါ်လေးက..မင်းနှင့်ဘဲ ချစ်မှာပါ…အား… သားရယ် သူက ညီးရင်းနှင့် ကျွန်တော်အပေါ်က ဆောင့်လုပ်တာနှင့်အညီ အောက်ကနေပြန်လုပ်ပေးပါတေ ။ ကျွန်တော်လည်း ထိုင်ရက် ပုံစံလေးပြောင်းကာ သူ့နို့တွေကိုကိုင်ပြီး သူ့ကို ဆောင့်လုပ်ပေး သူကလည်းကျွန်တော့လက်ကို အပေါ်ကအုပ်ကာ သူ့နို့တွေကို ကိုင်ကာပေးပါတေ။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ၅မိနစ်ကြာ လုပ်ပေးတော့ သူက… အား… သားရယ်.. ဒေါ်လေး ပြီး..အား…ရှီး… ပြီးချင်လာပြီ…. မြန်မြန်လေး… အား… လို့တောင်းဆိုတော့ သူ့နို့တွေကိုကိုင်ထားရာမှ သူ့ရဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲကာ အမြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူရဲ လက်တွေ ကျွန်တောလက်ကိုကိုင်ထားတာ အားပျော့ပြီး .. အား…သားရယ်…ဒေါ်လေး… အား.. ပြီး…အား…ပြီးပြီ…အား….. ပြောပြီး ငြိမ်သွားတော့တေ ။ ဒေါ်လေးငယ် ပြီးသွားတော့ ဘေးကလှဲကာ ကျွန်တော်လုပ်တာကို ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်ဖြူကို ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူ့ကိုလည်း ပက်လက်အနေအထားလေးနှင့် နေစေပြီး သူ့အပေါ်ကနေ မှောက်ချကာ ညီလေးကိုတေ့ပြီး သွင်းလိုက်ပါတေ။ သူ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးတေ။ သူကလည်း သူ့လက်နှစ်ဘက် ကျွန်တော့ရဲ့လည်းပင်းကိုသိုင်းဖက်ပြီး အောက်ကနေပြန်ပြီး ပင့်ပေးကာ လုပ်ပေးပါတေ၊ သူ့ကို ၃ မိနစ်ကြာ လုပ်ပေးပြီးမှာ သူက အနမ်းကိုရပ်ပြီး နုတ်က အား.. သားလေး.. အန်တီ ပြီးချင်လာပြီ အား.. အန်တီကို မြန်မြန်လုပ်ပေးတော့ အား.. တောင်းဆိုလာပြီး သူက ကျွန်တော့ကို တွန်းကာ။
အမြန်ဘဲ လေးဘက်ထောက်အနေထားနှင့်နေပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကို လက်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေး ဆီမှာတေ့ပေးပြီး နောက်ပြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလာတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီး နသိုးကြိုးပြတ်လုပ်တေ။ သူကလည်း သားရယ်… အန်တီ ပြီးပြီကွယ်…အား…. ပြောပြီး အရှေ့ကိုခေါင်းငိုက်ကျသွားတေ။ ဖင်ထောင်ပြီး ကျန်နေတာကို အနောက်ကနေ အချက်၂၀ လုပ်ပြီး ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူ့အထဲမှာအရည်တွေပန်းပြီး သူ့အပေါ်မှာ မှောက်ပြီး ကျသွားပါတော့တေ…… အဲ့ဒီနေ့က ဒေါ်ဖြူဖြူလည်း ည ၈ နာရီမှ ပြန်သွားတေ။ ဒေါ်လေး နှင့်ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒေါ်လေးကချက်ပြုတ်ပြီး ထမင်းစားလာခေါ်တော့ ရေချိုးပြီး ထမင်းအတူစားကာ ထမင်းစားခန်း မှာ နမ်းကြပြီး ညားကာစလင်မယားလိုဘဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွံ့ကျွေးကြတေ။ဦးလေးရောက်လာတော့မှ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ကြတေ။ နှစ်ရက်ကြာပြီး ကျွန်တော်ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်လာတော မာယာကို အိမ်ကိုပိုတော့ သူကကျွန်တော့ကို ကြည့်ပြီး ကို အခုတလော အရမ်းစိမ်းတေကွာ နှစ်ပတ်တောင် ပြည့်တော့မေ မာယာကို ရှောင်နေတာလေ။
ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အမေနှင့်တွေ့တာကို ပြောပေမဲ့ သူနှင့်ကျွန်တော့ကို သဘောတူတေ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြီးအောင် အရင်ကြိုးစားပြီးမှ လက်ထပ်ရမေလို့ ပြောသွားတာကိုဘဲ ပြောပြီး သူ့အမေကိုလုပ်တာနှင့် သူ့ကိုမလုပ်နဲ့ဆိုတာကို ထိန်ချန်ထားလိုက်တေ။ သူ့က သူ့အမေက ဒီနေ့ရုံးမှာ အလုပ်များလို့ အိမ်ပြန်နောက်မေလို့ ပြောလာတော့ ။ ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်လား ပြောပြီး နုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တော့ သူကလက်ကာပြီး သွားပါ အခုမှလာပြီး ပြောပြီး ပြန်နမ်းလာတေ ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆက်နမ်းတော့ သူက အင်္ကျီတွေကိုချွတ်ပြီး အနမ်းခွာလိုက်ကာ ကျန်တဲ့အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်တေ။ ကျွန်တော်လည်းဘဲ အဝတ်တွေအားလုံးကို သူ့လိုဘဲ အကုန်ချွတ်လိုက်တော့ သူက ညီလေးကိုကြည့်ပြီး မတွေ့တာကြာတော့ ပိုကြီးလာသလိုဘဲကွာ ပြောပြီး ညီလေးကို စပြီးစုပ်ပေးပါတေ။ အရင်တုန်းက အဆုံးထိမစုပ်ပေးခဲ့တဲ့ညီလေးကို အဆုံးထိစုပ်ပေးပါတေ။ သူလည်းဘဲ စုပ်ပေးတာက သူ့အမေလောက်မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး သကြားလုံးတုတ်ထိုးလေးကို တချက်ချင်း စုပ်သလိုစုပ်ပေးတာက စိတ်ကိုဆူကြွစေတော့တေ။
ကျွန်တော့က သူ့ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး သူ့ညီမလေးကို လျာဖျားလေးနှင့်အစေ့ကို ကလော်ပေးပြီး သူ့ညီမလေးတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နှင့်ဖုံးကာ လျာနှင့် လုပ်ပေးတော့ သူ့ရဲ့လက်က ကျွန်တော့ခေါင်းကိုဆွဲပြီး ကွတက်လာတေ။ သူလည်း အရမ်းကောင်းလာတော့ သူက ကိုရယ်… အား.. ချစ်ကို လုပ်ပေးပါတော့…အား.. ချစ်လေ…အား… အရမ်းလိုချင်ပြီကွယ်…အား…. ဆိုပြီး တောင်းဆိုလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုယက်ပေးတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ညီလေးကို ဂွင်းနှစ်ချက်သုံးချက်ထုပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးမှာ တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးလေးသွင်းပေးလိုက်တော့ သူလက်ကကာထားတော့ ခဏ္ဏစောင့်ပေးပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ နေလိုက်တေ။ သူ့ကကာတာကို လွတ်လိုက်တော့ နမ်းရင်းဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကာ အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်တေ။ သူက အား… ကိုရယ်… မလုပ်တာကြာလို့လား မသိဘူး.. အား… အရမ်းကောင်းတေကွာ ဒါပေမဲ့ မကြမ်းနဲ့အုံး..အား…. ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ခြေကိုအားပြုပြီး ညီလေးကိုပြန်ကာ ထုတ်ပေမဲ့ အတွင်းမှာ တစ်လက်မချန်ပြီး ပြန်သွင်းပြန်ထုတ်ဖြေးဖြေး လုပ်ပေးလိုက်တေ။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာ သူ့ကိုလုပ်ဘူးတာ သူ့ရဲ့ညီမလေးက ပြန်ပြီးကျဉ်းသွားမှာဘဲ တွေးပြီး သူကောင်းအောင် ကျွန်တော်က ကြိုးစားကာလုပ်ပေးလိုက်တေ ၅ မိနစ်ကြာတော့ သူက အား.. ကိုရယ်.. ချစ်လေ အား… ပြီးချင်လာပြီ အား…ကို..ချစ်ပြီးချင်ပြီကွာ.. မြန်မြန်….အား..ရှီး.. ပြောပြီး မြန်မြန်လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့တေ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးကိုခုပြီး သူ့ခါးကိုကိုင်ကာ အမြန်ဘဲ ဆောင့်ကာလုပ်ပေးလိုက်ပါတေ။ အစမှာကျဉ်းကျပ်ပေမဲ့ ပြီးခါနီးမို့ အရည်တွေနှင့်ချောမွေလာတော့ ကျွန်တော်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်ဘဲ သူ့ကို ဆောင့်လုပ်လိုက်တော့တေ။ သူပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ထပ်အချက် ၄၀ ဆောင့်လုပ်ကာပြီးသွားတေ ။ သူလည်းဘဲ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်နှင့်အတူပြီးသွားပါတော့တေ။ ကျွန်တော်တို့အချစ်ခရီးကို အတူတက်လှမ်းပြီး နှစ်ယောက်သား ဖက်ကာမှိန်းနေလိုက်ကြပါတေ။ သူ့ကိုကျွန်တော်က လုပ်ပေးတာ ကျွန်တော်ကတစ်ကြိမ်ဘဲ ပြီးပေမဲ့ သူကနှစ်ကြိမ်ပြီးတာမို့ ဆက်ပြီး မလုပ်ကြဘဲ သူ့အိမ်က ည ၆ နာရီမှ ပြန်ခဲ့ပါတေ ။
အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာ လမ်းထိပ်ကိုရောက်တော့ အန်တီဖြူဖြူက ကျွန်တော့ကိုကားပေါ်ကိုခေါ်ပြီး ဦးဘကြိုင်က သူနှင့်ထပ်ပြီး လုပ်ချင်ကြောင်းပြောလာတာကို ပြောတော့ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို ဦဘကြိုင်နှင့်လုပ်ချင်လို့လား မေးလိုက်တော့ သူက မလုပ်ချင်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ သူက အကျပ်ကိုင်ခံရမှာကို ကြောက်တေ လို့ပြောလာတော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ကျွန်တော်မှာ သူ့ရဲ့ ဗွိဒီယို ဖိုင်ရှိတေ၊ အဲ့ဒါကို အီဒဲ့လုပ်ထားတေ အန်တီမျက်နှာ မပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လေးငယ်ရဲ့ မျက်နှာပါတဲ့ ဗွိဒီယို ပြောလိုက်တော့ သူက ကျွန်တော့ကို ဖက်ပြီးပါးကိုနမ်းကာ ကျေးဇူးပါသားရယ်… အန်တီယောက်ျားက အားမရှိဘဲ သေခါနီးအချိန်မို့ အန်တီကလည်း သူမသေမှီမှာ အရှက်တကွဲမဖြစ်စေချင်ဘူးကွယ် ။ တကယ်တော့ အန်တီယောက်ျားက အန်တီကိုအခြားလူတစ်ယောက်နှင့်နေဖို့ သဘောတူပြီးသားပါကွယ် ။သားအန်တီနှင့် လိုက်ခဲ့ပါ လို့ပြောပြီး သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားပါတော့တေ။……… သူ့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့ အရိုးပေါ်အရေတင်နေတဲ့ ဦထွန်းကို သွားတွေ့တေ။ အန်တီဖြူက ကျွန်တော့ကို ဦးထွန်းနှင့်တွေ့စေတေ။
ဘာမှမပြောရသေးဘူး ဦးထွန်းက ကျွန်တော့လက်ကို ကိုင်ပြီးတော့ ညီလေး မင်း ဖြူဖြူကို ဂရုစိုက်ပါကွယ်။ ဦးက ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားနေရတော့ သူ့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘူးကွယ်။ မင်းသူ့ကို ဂရုစိုက်ပေးပါ ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့လက်ကို ကိုင်ကာ ဦးထွန်းရယ်လို့ ပြောပေမဲ့ စကားက နောက်ဆက်တွဲက ထွက်မလာတော့ဘူး။ တကယ်ချစ်ရင် အားလုံးကို နားလည်မူပေးရမေ ဆိုတာကို ဦးထွန်းက သင်ပေးနေသလိုဘဲ အန်တီဖြူဖြူကလည်း မျက်ရည်တွေနှင့် ဘေးကနေ ငိုပြီး ဦးထွန်းလက်ကို ကိုင်ထားတေ။ ကျွန်တော်လည်း ဦးထွန်းကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်မှားပါတေ ဦးထွန်း အန်တီဖြူကို ကျွန်တော်အတင်ဘဲ အချစ်စခန်းဖွင့်မိပါတေလို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ပြုံးပြီး မဟုတ်ဘူးကွ သူ့အသက်က အခုမှ ၃၈ နှစ် ဘဲရှိသေးတေ။ သူ့မှာလည်း စိတ်ဆန္ဒရှိမှာဘဲ ငါမှမတတ်နိုင်တာ အဲ့ဒါကြောင့် ခွင့်လွတ်ပါတေကွ သူသဘောတူဖို့ဘဲ လိုတာပါကွာ… ကဲထားလိုက်တော့..နောက်ဆုံးတစ်ခုကို အကူညီတောင်းမေကွာ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပေးပါကွာ သူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တေ ဒါဘဲ ပြောပြီး ဦးထွန်းက အိပ်ရာပေါ်မှာ မျက်လုံးမှိတ်သွားတေ။
ကျွန်တော့ကို အန်တီဖြူက လက်ဆွဲပြီး အပြင်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုကြည့်ပြီး အန်တီဘာမှမပူပါနဲ့ ကျွန်တော်ရှိပါတေဗျ လို့ပြောပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တေ။….. ကျွန်တော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဗွိဒီယို ဖိုင်ကို အသေချာလုပ်ပြီး DVD တစ်ချပ်ပေါ်မှာ ကူးထားလိုက်ပြီး ဦးဘကြိုင်ကို သွားပြီးပေးတေ။ ဦးလေး ဒါက ဦးလေးအတွက်ပါပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တေ။ နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ သွားဆုံကြပါတေ။ အဲ့ဒါကတော့ ဦးဘကြိုင်ရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်မှာပါ ဦးဘကြိုင်လည်း အမျိုးတွေမို့ ပုသိမ်ကနေ ကျွန်တော့ရဲ့အဖေအမေပါ လိုက်လာခဲ့ကြတေ။ ကျွန်တော့ မိဘတွေက လက်ဖွဲပစ္စည်းတွေပေးနေတုန်း ဦးဘကြိုင်က ကျွန်တော့ဆီကို ရောက်လာပြီး အဲ့ဒီ ဗွိဒီယို ဖိုင်ကိုဖျက်လိုက် မင်းကိုငါ တောင်းတဲ့ငွေကို ငါပေးမေ လို့ လေသံတင်းတင်းနှင့်ပြောသွားတေ။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ငွေမယူပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကို ခြိမ်းခြောက်ချင်တဲ့ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ပြန်ပြီးပညာပေးချင်လို့ပါ ၊ခင်ဗျားငွေကို ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး လို့ပြောတုန်း ကျွန်တော့မိဘတွေ ရောက်လာတော့ စကားပြတ်သွားပြီး ပြန်တော့သူက။
ကျွန်တော့ကိုလက်သီးဆုပ်ပြီး ဒေါ့သတကြီး ကြည့်ကာ ကျန်ခဲ့တေ…….. နောက်တစ်နေ့မှာ ကျောင်းကအပြန်မှာ မာယာကို အိမ်ကိုပို့ပြီး ပြန်ခဲ့တေ။ လမ်းထိပ်ကိုရောက်တော့ အန်တီဖြူက ကားပေါ်ကနေ ကျွန်တော့ကို ခေါ်ပြီးသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတော့ ကားပေါ်မှာ ကျွန်တော်နှင့်ဦဘကြိုင်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပုံပြောပြတော့ သူကအားရဝမ်းသာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့ကို ကျေးဇူးတွေတင်ပြီး သူရဲ့အိပ်ခန်းကိုခေါ်သွားပြီး ကျွန်တော့ကိုတင်းတင်း ဖက်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတော့ ကျွန်တော်လည်းပြန်နမ်းပြီး သူ့နို့တွေကို ချေပေးရင်း အိပ်ကုတင်ဆီကို သွားလိုက်ကြပါတေ။ သူက ကျွန်တော့ရဲ့ အဝတ်တွေကိုချွတ်ပေးပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ခိုင်းတေ။သူက သူရဲ့ အဝါရောင်မှာအမဲရောင်အဝိုင်းပါတဲ့ ဝမ်းဆပ်ကို တစ်လွှာချင်းဘဲ ချွတ်ပြီးခေါက်ကာ အိပ်ကုတင်ရဲ့ခြေရင်းက ဘောင်ပေါ်မှာတင်နေတာက စိတ်ကိုမထိန်နိုင်အောင် ဖြစ်ရတော့ ကျွန်တော်ကထပြီးထိုင်တော သူက လက်နှင့်လှဲချပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကို ပန်ရောင်နုတ်ခမ်းဆိုးဆေးဆိုးထားတဲ့ နုတ်ခမ်းနှစ်လွှာနှင့် စုတ်ပေးသလိုဘဲ လျာကလည်းထိပ်ဖျားလေးတွေကို ကစားပေးတော့ အရသာကအထ်တ်ထိပေါ့ဗျ။
ာ ကျွန်တော်လည်းဘဲ သူ့ကို ဆွဲပြီး သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ကျွန်တော့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေ ခွထိုင်စေပြီး ခြောက်ကိုး ပုံစံနှင့် သူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းကို လျာဖျားလေးနှင့် သူ့ရဲ့ ညီမလေးနုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို အပေါ်အောက် စုန်ဆန်ကာ ကစားပေးလိုက်တေ။ သူက ကျွန်တော့ညီလေးကို စုတ်ပေးတာကို ခဏ္ဏရပ်ပြီး အား… သားရယ်… လုပ်တတ်လိုက်တာကွယ်… အား… ပြောပြီး ဆက်ကာ ညီလေးကို စုပ်ပေးပြီး ခဏ္ဏကြာတော့ သူက သားရယ်.. အား.. အန်တီကို လုပ်ပေးပါတော့ကွယ်… အန်တီ…ရှီး…အရမ်းလိုချင်ပြီကွာ..အား.. တောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ညီလေးအပေါ်ကနေ ခွပြီး ညီလေးကိုကိုင်ကာ တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးလေး ထိုင်ချလိုက်ပြီး စကော့ဝိုင်းလှည့်သလိုဘဲ ဖြေးဖြေး လှည့်ကာပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေပေးပြီး အောက်ကနေ သူ့လုပ်တာကိုနေပေးလိုက်တေ။ သူ့က ကျွန်တော့ကို ညှိ့မျက်လုံး ကလေးနှင့်စိုက်ကြည့်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါမှေးသွားတာလေးက အရမ်းကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကိုကြွစေတေ။ သူ့က အပေါ်ကနေ ၃ မိနစ်ကြာလုပ်ပေးပြီး ကိုလေးကိုင်ကာ ဆင်းလာပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ အပေါက်ကနေ မြန်မြန်လုပ်ပေးလာတေ။
ကျွန်တော်လည်း သူပြီးချင်လာပြီး ဆိုတာကိုသိတာနှင့် သူ့ကိုနမ်းပြီး သူ့ကို အောက်ကနေပြီး ပင့်ပင့်ကာမြန်မြန်ဆောင်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့နှင့်အတူဘဲ ပြီးသွားတော့ သူက ကျွန်တော့ပါးတွေကို နမ်းပြီး သားရယ်… အန်တီလေ ဒီနေ့မှာ အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာသလို သားလုပ်ပေးတာကိုလည်း အရမ်းအားရတာကွာ ပြောပြီး ခဏ္ဏလေး ကျွန်တော့အပေါ်မှာ နေပြီး ဘေးကိုဆင်းတော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အချစ်ရည်တွေက ကျွန်တော့အပေါ်မှာ ကျဆင်းလာခဲ့တေ။ သူအမောပြေမှ ကုတင်အောက်ဆင်းပြီး သူ့ရဲ့ထမိန်တစ်ထည်ကို ယူပြီးသုတ်ပေးပါတေ…….ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်ဖြူဖြူနှင့်လုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဦးလေးထွန်းမောင်က သူနောက်နေ့ ခရီးထွက်စရာရှိတေ အိမ်ကိုကြည့်ပေးဖို့ပြောပြီး သူ့ရဲ့ သမီး ကျွန်တော့အမ ဝင်းဝင်းက အလုပ်နှင့်ပြန်ပြီး ဒီမြို့ကို ပြောင်းလာမို့ သွားခေါ်ရမှာလို့ပြောကာ ထမင်းစားပြီး အိပ်ရာကိုစောစောဝင်သွားပါတေ ။ကျွန်တော်လည်းရေချိုး ထမင်းစားပြီး စာကြည်ကာ အိပ်စက်လိုက်ပါတေ။ ည ၂နာရီး အချိန်မှာ ဒေါ်လေးငယ်ဟာ ကျွန်တော့ညီလေးကို စုပ်ပေးနေတာ။
ကျွန်တော်နိုးလာတော့ ကျွန်တော့ပါးစပ်ကို လက်နှင့်ပိတ်ပြီး အသံမထွက်ဖို့ အမူယာလေးပြပြီး အရမ်းကိုဒေါသကြီးနေတဲ့ ကျွန်တော့ညီလေးအပေါ်ကို ခွပြီး ဖြေးဖြေးလေးထိုင်ချပါတေ။ အဆုံးထိရောက်တော့မှ သူ့ရဲ့ညအိပ်ဂါဝန်ရှည်ကို ခေါင်းကနေ ချွတ်ချလိုက်တေ။ သူ့ကိုယ်လေးကိုင်းလာပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အပေါ်ကနေ ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ပေးပါတေ။ သူက ကျွန်တော့ကိုနမ်းတာကိုရပ်ပြီး ပြန်ပြီကိုယ်ကိုမတ်ကာ လက်ကို ကျွန်တော့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ကာ အီကြာကွေးကို မကျော်ခင် လှိမ့်တုံးနှင့်လှိမ့်ကာ မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလာပါတေ ။ ကျွန်တော် လည်းဘဲ အောက်ကနေပြီး သူ့နို့တွေကိုချေပေးလိုက်တော့… အား…. ကောင်းလိုက်တာ.. သားရယ်… အား… ညီရင်းနှင့် အပေါ်ကလုပ်မြဲလုပ်ပေးပါတေ၊ သူ့ကိုယ်လေးက ပြန်ပြီးဆင်းလာပြီး ကျွန်တော့ကို… အား… သားရယ်… အန်တီပြီးချင်လာပြီကွယ်… အား.. မြန်မြန်လေး… အန်တီဒီနေ့… မင်းကို… အရမ်းသတိရနေတာ…အား… မြန်မြန်လုပ်ပေး.. လို့နားကိုကပ် တိုးတိုးလေးပြောကာ ဘေးကိုဆင်းလိုက်ပြီး ဖင်ထောင်ပေးတေ။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့အနောက်မှာ ရပ်လိုက်ကာ ညီလေးကိုသွင်းပြီး အနောက်ကနေ သူ့ကို မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတေ၊ သူက ပြီးပေမဲ့ ကျွန်တော်မပြီးသေးတော့ ဆောင့်လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခရေဝလေးကို လက်မလေးနှင့် မွှေပေးလိုက်တော့ သူဆီက အိုး… ဆိုတဲ့ညီးသံလေး ထွက်လာပြီး ခေါင်းတစ်ချက် မော့ပြီး ပြန်မှောက်ကျသွားတေ၊ ကျွန်တော်လည်း သူက ဘာမှမပြောတော့ ပိုပြီးတော့ သူ့ခရေလေးကို ချေပေးပြီး တံတွေးလေးထွေးချလိုက်ပြီး လက်မကိုသွင်းပြီး လုပ်ပေတေ။ အား.. သားရယ်… အန်တီလေ တစ်ခါမှ အဲ့ဒီနေရာကို အား… မလုပ်ဖူးဘူးကွယ်…အား…ဒါပေမဲ့ အရသာက အား..တမျိုးပါဘဲ..အား…ရှီး… ညီးသံလေးနှင့်ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကို သူ့ညီမလေးဆီကနေ ထုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ခရေမှာတေ့ကာ ဖြေးဖြေး သွင်းလိုက်တော့ အရမ်းကျပ်တော့ ၂လက်မဘဲဝင်တော့ ဒေါ်လေးလက်က နောက်ပြန်ကျွန်တော့ကို တားထားတောတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်မှောက်ချပြီး သူ့နားရွက်လေးကို သွားနှင့်မနာအောင် ဖွဖွလေးကိုက်ကာ သူ့နို့တွေကို ချေပေးတေ။
သူကိုဖီလင်တင်ပြီး အနောက်ကနေ အဆုံးထိရောက်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့… အား… သားရယ်… အရမ်းဘဲကွာ…ကျွတ်..ကျွတ်.. ကွဲသွားပြီလား မသိဘူးကွာ..အား… အရမ်းနာတေ.. လို့ပြောတော့ သူ့ကိုမလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းသူ့အထဲမှာထားပြီး သူ့ရဲ့နို့တွေကိုချေပြီး နေလိုက်တေ။ သူလည်းပြန်ပြီး ကျွန်တော့ကို ဖြေးဖြေးလေး နောက်ပြန်လုပ်ပေးလာပြီး သား..သိမ်မကြမ်းနဲ့အုံးနော် အား..ဖြေးဖြေးလေးဘဲ လုပ်ပေး..အရမ်းကောင်းလာပြီ..အား.. ဖြေးဖြေးလေး.. ပြောကာ လုပ်ပေးလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဖြေးဖြေးလေး သူ့နှင့်ကပ်ပြီး လုပ်ပေးတေ၊ သူကနေပြီး သား…ဒေါ်လေး..ကောင်းလာပြီ.. အား…. ပြောလာတော ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမတ်ကာ သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီး မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သားပြီးဆုံးချင်းကို ပြိုင်တူရောက်သွားတေ။ သူလည်း ည ၃ နာရီထိုးခါနီးမှာ ပြန်သွားတေ။ ကျွန်တော်လည်း အိပ်စက်လိုက်ပါတော့တေ။ နောက်နေ့မနက် ကျွန်တော်နိုးလာတော့ ဦးလေးထွန်းမောင်မရှိတောဘူး။ ရေချိုးပြီး ကော်ဖီစားပွဲမှာတော့ ဒေါ်လေးနှင့်ကျွန်တော် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်သောက်ကြတုန်းမှာ။
စားပွဲက ကြက်ဥကျော်ပုဂံကို ယူပြီး ကျွန်တော်နှင့်ဘေးချင်းကပ်ပြီး အနီးကပ်လာထိုင်တေ။ သူက ကြက်ဥတွေကို ခွံ့ကျွေးပြီး သား..မနေက မင်းလုပ်ထားတာ နာနေတေကွ.. လို့ပြောပြီး ပြုံးပြတေ။ ကျွန်တော်သိတာပေါ့ဗျာ မနေ့ညက ဒေါ်လေးရဲ့သွေးစလေးတွေ ရေချိုးမှဘဲ စင်သွားတေလေ။ ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီး ပြုံးပြကာသူ့ပါးကိုနမ်းလိုက်တေ။ သူကလည်း မျက်လုံးလေးမှေးပြီး အနမ်းခံတေ သူ့ရဲ့သနပ်ခါး ရနံ့လေးသင်းနေတော့ ညီလေးက ပုဆိုးထဲကနေ ခေါင်းပြူပြီး ထွက်လာတေ။ဒေါ်လေးကမြင်သွားပြီး အရမ်းဆိုးတာဘဲ…ကြည့်စမ်း..ကြည့်စမ်း.. ပြန်ပြီး လူကိုရန်ရှာပြန်ပြီကွယ်… ပြောပြီး ထိုင်ခုံကနေဆင်းပြီး ညီလေးကို ပုဆိုးထဲကနေထုတ်ပြီး သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းနှင့်စတင်ကာ စုပ်ယူကာ လက်ကလည်းညီလေးကို ဂွင်းထုပေးတေ၊ သူက ကျွန်တော့ကို မျက်လုံးနှင့်မော်ကြည့်ပြီး .ညီလေးကို နုတ်ခမ်းနှင့်စုပ်သလိုလဲ လျာကလည်းထိပ်ပတ်လည်ကို ရစ်ပတ်သလိုကစားတော့ ညီလေးက အရမ်းကောင်းလာပြီး.. ဒေါ်လေး..အား… ကျွန်တော်ပြီးတော့မေ..အား..ရှီး… ပြောလိုက်မှ သူက ပိုပြီးလုပ်ပေးလာတော့ ညီလေးကသူ့ရဲ့ပါးစပ်မှာ အရည်တွေပန်းလိုက်တေ။
သူကအရည်တွေကို တစ်စက်မကျန်အောင် မြိုချလိုက်ပြီးမှ အပေါ်ကကော်ဖီတစ်ငုံသောက်လိုက်တေ။ သူက ပြုံးပြီး… သားကို ကြက်ဥတွေကျွေးပြီး သားဆီက အချစ်တွေကို ဒေါ်လေးသောက်လိုက်တာပါ ပြောပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ပါးကိုနမ်းပါတေ။ သူက ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မို့ ကျွန်တော်ကျောင်းမသွားရတာသိလို့ မနေ့ကတည်းက ဈေးသွားပြီး စားသောက်စရာတွေ ဝယ်ထားတေ။ သူက ချက်ပြုတ်နေတုန်းမှာ အန်တီဖြူဖြူ ရောက်လာတေ။ သူကိုလည်း မနေ့ကတည်းက ဒေါ်လေး ဖုန်းဆက်ထားတေလို့ သိလိုက်ရတေ။ အန်တီဖြူက ကျွန်တော့ပါးကို ဆွဲပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ ဒီနေ့တော့ ဒို့သုံးယောက် ပျော်ပျော်နေကြမေနော် ယောက်ျား.. လို့ ပြောတော့ ဒေါ်လေးက ဟင်းချက်ရာကနေ ကိုက အကူဘဲလုပ်မေလေ မနေ့က သူလေ ဒို့ရဲ့ ပါကင်လေးကို ဖောက်သွားတေကွ.. နာနေတုန်းဘဲ ပြောကာ ပြန်လှည့်ပြီး ဟင်းပြန်ချက်နေလိုက်တေ ၊ အန်တီဖြူပြုံးပြီး ဟယ် တကယ်လား ဒို့ကတော့ လုပ်ဖူးပါတေ ဒို့ရဲ့ယောက်ျားနှင့် ဒါပေမဲ့ အရမ်းနာလို့ ဆက်ပေးမလုပ်တော့ဘူး ၃ ရက်လောက်ကို မထိုင်နိုင်ဘူးကွာ သိလား။
အခုက မင်းက အေးဆေးပုံပါလား ပြောပြီး ကျွန်တော့ဘက်ကို လှည့်ပြီး သူရဲ့စလင်ဘတ်အိပ်ကနေ ဆေးကဒ်ကိုယူပြီး ကျွန်တော့ကို တစ်လုံးတိုက်ပြီး သူလည်းဘဲ တစ်လုံးကို သောက်တေ။ ကျွန်တော့လက်ကိုဆွဲပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အိပ်ခန်းကို သူက ခေါ်သွားတေ။ သူက အခန်းဝင်ဝကတည်းက ကျွန်တော့ကိုနုတ်ခမ်းချင်း စတင်နမ်းပြီး ကျွန်တော့ကို အိပ်ရာပေါ်မှာ တွန်းချလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ချွတ်ကာ ညီလေးကို စတင်ကာနုတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့ နုတ်ခမ်းတစ်စုံနှင့် စုတ်ပေးပါတေ။ ကျွန်တော်လည်းလှဲရာကထပြီး အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်တေ။ ညီလေးက ထောင်မတ်နေတော့မှ သူကနောက်ဆုတ်သွားပြီး သူ့ရဲ့ထမိန် အပြာရောင်အချောသားနှင့် အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်တော့တေ။ သူ့ရဲ ညီမလေးကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အမွေးတွေကိုမြင်တော့ စိတ်ကကြွသွားတေ။ သူက ကျွန်တော်ထိုင်တာကို တွန်းလှဲချပြီး ညီလေးအပေါ်ခွပြီး ဖြေးဖြေးလေး ထိုင်ချလိုက်တေ ။ အရည်တွေစိုနေတဲ့ သူ့ညီမလေးကလည်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလေ။ သူအပေါ်ကနေပြီး ထိုင်ထဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကာပေးတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အောက်နေသူ့နို့တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး။
သူ့ထိုင်ထလုပ်တာ အဆင်ပြေအောင် အောက်ကနေပင့်ဆောင့်ပြီးလုပ်ပေးပါတေ။ သူက အရှိန်ရလာတော့ ကျွန်တော်သူ့နို့ကိုကိုင်တဲ့လက်ကို ပြန်အုပ်ကိုင်ပြီး အား.. ကောင်းလိုက်တာကွာ… အား… ရှီး.. အိုး.. အရမ်းကောင်းတေ… သားရယ်… အား…. ညီးပြီး ကျွန်တော့ဘေးကိုဆင်းကာ ပက်လက်အနေအထားပြီး နေပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်ကနေ မှောက်ချလိုက်ပြီး ညီလေးကိုသူ့လက်နှင့်ကိုင်ကာ သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း အပေါ်ကနေ နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး မြန်မြန်ဆောင့် လုပ်ပေးတော့ သူ့လက်နှစ်ဘက်က ကျွန်တော့ကျောကို အထက်အောက် ပွတ်သတ်ကာ အောက်ကနေဆောင့်ချက်နှင့်အညီ ပြန်ပြီးပင့်ကာခံပေးတေ။ သူကပြီးချင်လာတော့မှ ကျွန်တော့ကိုနမ်းရာကနေ ရပ်လိုက်ပြီး… အား… သားရယ်.. အန်တီ ပြီးတော့မေ..သားရယ်… မြန်မြန်လေး…အား..ကောင်းတေ..မြန်မြန်..အား..ရှီး.. ညီးကာ သူလည်းပြန်ပြီးဆောင့်လုပ်ပေးပါတောတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့ကိုဆွဲကိုင်ကာ သူ့ကိုကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တာ ၁ မိနစ်အကြာမှာ သူပြီးသွားပြီး လက်တွေက ကျွန်တော့ကိုဆုပ်ကိုင်တာ အားပျောသွားတေ။
အသက်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ရှုနေတဲ့သူ့ရဲ့ရင်က နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် ဖြစ်နေသလိုဘဲ ကျွန်တော်လည်း မပြီးပေမဲ့ ခဏ္ဏ အပန်းဖြေလိုက်တေ သူအမောပြေမှ သား..မပြီးသေးရင်.. ဆက်လုပ်ပါ ပြောလာတော့ ကျွန်တော်သူ့ကို ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး သူ့အနောက်ကနေ နေရာယူပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီမှာ ညီလေးကိုတေ့ပြီး အဆုံးထိ သွင်းလိုက်ကာ သူ့ကို ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ခရေကိုလက်မနှင့် ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းကာလုပ်ပေးတေ။ သူက နောက်တ်ကြိမ်အတွက် ပြန်လည်းပြီး နောက်ပြန်ကော့ကာ ပြန်ဆောင့်ပေးလာပြီး… အား..သာရယ်… မင်းက အဲ့ဒီနေပါ..အား… လုပ်ချင်လို့လား.. အား..အန်တီကောင်းလာပြန်ပြီကွယ်… မြန်မြန်လေး…အား… ပြောလာတောတေ။ ကျွန်တော်လည်း လက်မတစ်ချောင်းဝင်သွားတဲ့ လက်ကသွင်းရက် ဖင်ကိုဆွဲပြီး နောက်တစ်ဖက်က သူ့ခါးကိုဆွဲကာ ကြမ်းကြမ်းဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ သူလည်း နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပြီးသွားတေ။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်လာတော့ သမှောက်ကျသွားပြီး ကော့ကာထောင်ပေးထားတဲ့ ခရေထဲက လက်မကိုနုတ်လိုက်ပါတေ။
သူ့ညီမလေးဆီကနေ ညီလေးကိုနုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ခရေမှာ ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပြီး သူ့အဆင်ပြေတာနှင့် သူ့ခါးကိုကိုင်ပြီး ဆောင်လုပ်ကာ သူရဲ့ ခရေမှာဘဲ အချစ်ရည်တွေပန်းကာ ပြီးသွားပါတေ။ သူ့က သုံးကြိမ်အထိပြီးသွားပြီး ကျွန်တော်က တစ်ကြိမ်ဘဲပြီးတေ။ ဆေးသောက်ထားတော့လည်း ညီလေးကပြီးသွားပေမဲ့ ခဏ္ဏလေးဘဲ အားပျောသွားပြီး ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လာတော့တေ။ အန်တိဲဖြူက ပြုံးလိုက်ကာ.. သားက အရမ်းသန်တာဘဲကွာ.. ဟင်း..ဟင်း.. ပြောပြီးပါးကိုနမ်းကာ ထမင်းအရင်စားရအောင်ကွယ် ပြီးမှဘဲ နှစ်ယောက်တစ်ယောက် ဆက်ဆင်နွဲမေ ဟုတ်ပြီလား ပြောကာ သူက အတွင်းခံတွေမဝတ်ဘဲ ထမိန်နှင့်အင်္ကျီဘဲ ဝတ်တေ။ ကျွန်တော်လည်း ပုဆိုးဘဲဝတ်ကာ နှစ်ယောက်သား ထမင်းစားခန်းကို မဝင်ခင် ရေချိုးပြီးမှ သုံးယောက်အတူ ထမင်းစားကြပါတော့တေ။ စားသောက်ဆေးကြောပြီးတော့ ကျွန်တော့အခန်းကိုဘဲ သွားကြတေ။ သူတို့က ဦဘကြိုင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပညာပေးမလဲဆိုတာ သိချင်တေ ကျွန်တော်က နောက်မှပြောပြပါ့မေလို့ပြောကာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဖက်လိုက်ပြီး အန်တီဖြူရဲ့ထမိန်ကို ဖြေချလိုက်ပြီး။
သူ့နို့ကို ဒေါ်လေးနှင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တစ်လုံးစို့ပေးတေ။ အန်တီဖြူက ညီသံလေး နှင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းတွေကို ပြန်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးတေ။ အန်တီဖြူနို့ကိုစို့တာ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုအိပ်ရာပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပြီး ဒေါ်လေးရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးပြီး ကျွန်တော်လည်း ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တေ။ ကျွန်တော်နှင့်ဒေါ်လေးငယ် နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတော့ အန်တီဖြူက ထလာပြီး ညီလေးကိုစုပ်ပေးလာတေ။ ညီလေးတင်းလာ တော့ အန်တီဖြူစုပ်ပေးတာကို ရပ်စေပြီး သူ့အပေါ်ကနေ မှောက်ချပြီး ညီလေးကို အန်တီဖြူညီမလေးနှင့်တေ့ပြီး အဆုံးထိရောက်အောင် ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကာ သွင်းလိုက်တေ။ သူ့ရဲ့လက်က ကျွန်တော့ရဲ့ လက်နှစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခြေနှစ်ချောင်းနှင့်ကျွန်တော့ကိုချိတ်ကာ ဆွဲဆွဲပြီးလုပ်ပေးလာတေ ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီး အပေါ်ကနေ တစ်ချက်ချင်းကို ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ကာ လုပ်ပေးတေ။ သူလည်းကောင်းလာပြီမို့ မျက်လုံးလေးမှေးကာ ဆောင့်ချက်နှင့်အညီကို အောက်ကနေပြန်လုပ်ပေးလာတေ ။
သား… အား.. အန်တီဖြူ.. ပြီးတော့မေ…အား… မြန်မြန်လေး..အား..လုပ်ပေးပါတော့ကွယ်…..အား..ပြောပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ကျော့ကို လက်သည်းတွေနှင့်ကုပ်ပြီးပြောလာတော ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုမြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ ၂ မိနစ်အကြာမှာ သူပြီးသွားတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်ကဆင်းပြီး ဘေးမှာပက်လက် အနေအထားနေလိုက်တော့ ဒေါ်လေးက ကျွန်တော့အပေါ်ကနေ ခွထိုင်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ပေးပါတေ ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့နို့တွေကိုလက်နှင့် ချေပေးပြီး အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ပေးတေ။ သဒေါ်လေးက အပေါ်ကနေ စကော့ဝိုင်းလေးလုပ်ပေးသလိုဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ မြန်မြန်လေး ထထိုင်ဆောင့် ကာလုပ်ပေးတေ။ သူကောင်းလာပြီး ပြီးချင်လာတော့ သူ့ကိုလေးကိုင်းပြီး ကျွန်တော့အပေါ်ကိုဆင်းလာတော့ သူ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းကာ အောက်ကနေ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ကာ သူနှင့်အတူ ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတော့တေ။ အဲ့နေက သူတို့နှင့် နောက်ထပ်မလုပ်ဖြစ်ဘဲ သုံးယောက်သား စကားတွေ ပြောပြီး နားလိုက်ကြတေ……..။
ကျောင်းကိုရောက်တော့ အခန်းမှာဝင်ပြီး စာသင်ပြီးတာနှင့် မာယာနှင့်အတူ သူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတေ။ သူအမေလည်း မရှိတော့ နှစ်ယောက်သားအိပ်ကုတင်ဆီကို တန်းသွားကြတေ။ ကုတင်အနီးမှာရပ်ပြီး နှစ်ယောက်သားနုတ်ခမ်းချင်းပြီး သူ့ရဲ့ အနက်ရောင်ထမိန်စကပ်နှင့် အနီရောင်တီရှပ်လေးကိုချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်ကြတေ ။ ကျွန်တော့ရဲ့အဝတ်တွေကို ကုတင်ပေါ်မတက်ခင်ကတည်းက ချွတ်ထားခဲ့တော့ ထောင်မတ် နေတဲ့ညီလေးကို မာယာက စုပ်ပေးနေတုန်းမှာ သူ့ရဲ့ဘရာနှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပေးတေ။ မာယာကလည်း အပြုစု တော်တဲ့သူလေ။ညီလေးကို သူ့ရဲ့လက်နှင့်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးပြီး ညီလေးထိပ်တစ်ခုလုံးကို ပါးတွေချိုင့်ဝင်အောင်ထိ စုတ်ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ပြေကျလာတဲ့ ဆံပင်တွေကို သပ်တင်ပေးပြီး ခါးကိုလှုပ်ကာ သူစုပ်ပေးနေတဲ့အတိုင်းဘဲ လိုက်လုပ်ပေးတေ။ သူစုပ်ပေးတာကို ရပ်စေပြီး သူ့ရဲ့ပေါင်ကြား ခေါင်းဝင်ကာ သူ့ညီမလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကို လျာဖျားနှင့် အပေါ်အောက် ကစားပေးလိုက်တေ။ သူ့ညီမလေးဆီက အရည် နည်းနည်းစိုလာတော့။
သူ့ရဲ့အစေ့လေးကို လျာဖျားလေးနှင့်ကလိ ပေးပြီး လက်ညိုးလေးနှင့် အသွင်းအထုတ် ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကာ ပေးလိုက်တော့ သူ့ရဲ့တင်ပါးလေးကို ကြွကာ ကျွန်တော့ခေါင်းကို ဖိကပ်ထားတေ။ သူကနေပြီး အား… ကိုရယ်.. ချစ်လေ…အား… လိုချင်ပြီကွာ… ပြောကာ ကျွန်တော့ခေါင်းကို အပေါ်သို့ဆွဲတင်ပြီး သူ့နှင့်မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ဖြစ်မှ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်ကြတေ။ သူ့ရဲ့လက်က ညီလေးကိုကိုင်ပြီး တစ်ချက်နှစ်ချက်ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး သူ့ညီမလေး ဆီမှာတေ့ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကာ ညီလေးကို အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်တေ။ သူလည်းဘဲ အောက်ကနေပြီး ပြန်လုပ်ပေးတေ။သူလက်တွေနှင့် ကျော့ပေါ်မှာ အထက်အောက်ကစားပေးကာ နုတ်ကလည်း အား… အရမ်းထိတေ..ကို…အား…အရမ်း..ကောင်း.. အား…အရမ်းချစ်တယ်..ကို..အား…ချစ်တယ်..ချစ်တယ်.. ပြောပေးတေ။ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆွဲထူပြီး နှစ်ယောက်သား ထိုင်ရက်အနေအထားနှင့် နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ လုပ်ကြတေ။ သူက ကျွန်တော့ကို လှဲချပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ကာလုပ်ပေးတေ။
သူက ခေါင်လေးငုံ့လာတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ကျောလည်ထိရှည်တဲ့ ဆံပင်တွေက မျက်နှာနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်သလို ဖြစ်နေပြီး သူ့မျက်လုံးမှေးပြီး ရှီး…အား…ရှီး..အား.. အရမ်းကောင်းတေ..ကိုရယ်.. ညီပေးတာလေးက ရမ္မတိုးလာစေတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အောက်ကနေ တစ်ချက်တစ်ချက် ပင့်ပြီးဆောင့်ကာ လုက်ပေးတေ ။ သူကိုယ်လေးက ကျွန်တော့အပေါ်မှာ မှောက်ချကာ အား..ကိုရယ်… ချစ်ပြီးတော့မေ…အား.. ရှီး…မြန်မြန်လုပ်ပေးပါတော.. အား…. နားမှာကပ်ပြောပြီး ဘေးတစ်စောင်းလေး နေပေးတော သူ့အနောက်က သူ့ကိုကပ်ပြီးသူ့ခြေတစ်ဖက်ကို မြှောက်ပြီး မြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ သူပြီးသွားပြီး နောက်ထပ် အချက် ၂၀ ဆောင့်လုပ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတေ။ ကျွန်တော်နှင့်သူက အမောဖြေပြီးမှာ ထပ်မလုပ်ဖြစ်ဘဲ စကားတွေပြောပြီး ညနေ သူ့အမေ ရုံးက ပြန်မလာခင်မှာ အိမ်ပြန်ခဲ့တေ။ အိမ်ရောက်တော့ ခဏ္ဏနားပြီး ရေချိုးထမင်းစားကာ စာတွေကိုကျက်ပြီးမှ အိပ်ပျော်သွားတေ။နောက်နှစ်ရက်လည်း ဘယ်သူနှင့်မှ မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ အန်တီဖြူသားကို လေဆိပ်ကို လိုက်ပို့ပေးပြီး။
သူ့အိမ်မှာ သူနှင့်အတူ ဦးဘကြိုင်နှင့်အကြောင်းတွေကို ပြောပြလိုက်တေ။သူက အသေးစိတ် နားထောင်ပြီးမှ အဲ့ဒါဆိုရင်…ချိုချို ကိုလည်း မင်းလုပ်ပြီးပြီပေါ့လို့ ပြုံးပြီးပြန်မေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို လုပ်ပါတေလို့ပြန်ဖြေတေ။ ညနေမှ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တေ။ ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲကလည်း ဖြေနေရပြီ အဲ့ဒါကြောင့် စာတွေဘဲကြိုးစားကျက်ကာ စာမေးပွဲကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့တေ။ စာမေးပွဲပြီးသွားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ မာယာက သူ့အဖွားတို့နှင့်အတူ တောင်ကြီးကို အလည်လိုက်သွားတေ။ ကျွန်တော်လည်း ပုသိမ်ကို မိဘတွေဆီသွားပြီး တပတ်နေကာ ပြန်ပြီး စကားပြောသင်တန်းတက်ဖို့ ပြန်လာခဲ့တေ။ အိမ်မှာနေချိန်က နည်းတေ အပြင်မှာ သင်တန်းတက်ပြီး ပြန်လာရင် အန်တီဖြူဆီကို သွားတေ ။ယောက္ခမလောင်းကြီးဆီသွားတေ။ ဒီနေ့မှာ သင်တန်းမရှိတော့ ယောက္ခမဆီကို ဖုန်းဆက်တေ ၊ တောင်ကြီးက သူ့ရဲ့အကိုဆုံးလို့ သွားမလို့ အခု အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာလို့ ပြန်ဖြေတေ။ အဲ့ဒါနှင့်ဘဲ အိမ်ကိုပြန်လာတော့ ဒေါ်လေးချိုနှင့်လမ်းမှာတွေ့တော့ သူနှင့် အတူ သူ့အိမ်ကို လိုက်သွားတေ။
သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူကတံခါးကိုပိတ်ပြီး ကျွန်တော့ကို ဆွဲပြီး သူ့အခန်းဆီကို မြန်မြန်လမ်းလျောက် ခေါ်သွားတေ။ သူက ကျွန်တော့ကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး ကျွန်တော့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းချလိုက်တေ။ သူက သူ့ရဲ့အပြာနုရောင် ဝမ်းဆပ်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး ပြုံးပြီး… မင်းလေးကို… ဒေါ်လေးက.. တွေ့ချင်လို့ ရှာနေတာကွ မင်းကို ဒီနေ့မှတွေ့လို့ ခေါ်လာနိုင်ခဲ့တာ ပြောပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တက်လာခဲ့တေ။ သူက ညီလေးကိုကြည့်ပြီး ဟင်း..ဟင်း.. ဒါက..အရမ်းကို စွဲဆောင်မူ ရှိတေကွ.. လို့ရယ်ကာပြောတေ။ သူ့လက်နှင့်ညီလေးကို ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး သူ့ရဲ့ ပန်ရောင်နုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ဆိုးထားတဲ့နုတ်ခမ်းနှင့်စုတ်ပေးတေ။ သူက လက်ကိုဥလေးတွေကစားပေးပြီး ညီလေးရဲ့ဒေ့လေးကိုလျာနှင့် စက်ဝိုင်း ဝိုင်းကာ ကစားပေးတေ။ မျက်လုံးချင်းစိုက်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးလေးမှေးပြ မျက်လုံးလေးနိပ်ပြနှင့်ကို ရမ္မက်ကြွအောင် လုပ်ပေးနေတော့တေ။သူကို စုတ်ပေးတာရပ်စေပြီး သူ့ကိုလှဲအိပ်စေပြီး သူ့အပေါ်ကနေပြီး နုတ်ခမ်းကို နမ်းပြီး နို့တွေကိုချေပေး စို့ပေးတေ။ ပြီးမှ အောက်ကိုဆင်းကာ ညီမလေးကို ပါးစပ်တစ်ခုလုံးနှင့်ငုံကာ လျာဖျားလေးနှင့်သွင်းပေတေ။
သူ့ရဲ့ မထူမပါးတဲ့ အမွှေးလေးတွေကို လက်နှင့်မနာအောင် ဆွဲဆွဲကာကစားပေးလိုက်တေ။ အား.. သားရယ်… လုပ်တော့ကွယ်.. အား.. ဒေါ်လေး.. ..အား.. အရမ်းလိုချင်ပြီကွယ်..အား.. လုပ်ပေးပါတော… ပြောမှဘဲ ရပ်လိုက်တေ။ သူ့ညီမလေးဆီမှာ ညီလေးကိုတေ့ပြီး ထိုင်ရက် အနေထားနှင့်သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ခါးမှာထားပြီး ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးဆောင့် လုပ်ပေးတေ။ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့ နို့တွေကိုသူ့လက်ကဆုပ်ကိုင်ပြီး သူလည်း သာယာနာပျော်ဘွယ် ညီးသံလေးနှင့် ညီးနေတေ။ သူ့ကို ၂ မိနစ်ကြာ လုပ်ပေးပြီး သူ့ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ပခုံးပေါ်တင်ပြီး အပေါ်ကနေဖိဖိပြီး ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ ညီလေးကို အဆုံးမရောက်ခင်ပြန်သွင်း ပြန်ထုတ် ခပ်ဆတ်ဆတ်လုပ်ပေးတော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့လက်မောင်းကို တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်လာတေ။.. အား… သားရယ်… အရမ်းထိတေကွာ..အား…အရမ်း.. အား…အရမ်းကောင်းတေ..အား..အဲ့ဒီအတိုင်ဘဲ…အား.. သွားကြိတ်သံနှင့်ပြောကာ ညီနေတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ပုံမှန်လုပ်ပေးပြီး သူ့ရဲ့ခြေတွေကို ပခုံးကနေပြန်ချပြီး ။
သူ့ကိုဆွဲထူကာ နှစ်ယောက်သားထိုင်ရက် အနေထားနှင့်နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ လုပ်တေ။ သူကလည်း ကျွန်တော့လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဘက်နှင့်တွဲခိုကာ သူ့ခါးကို ကိုင်ကာ မမပေးပြီး သူထိုင်ထလေးလုပ်ပေးတာကို ကူပေးတေ။သူက ခါးကိုလှုပ်ပြီး ကျွန်တော့လည်ပင်းကိုကိုင်ပြီး မြန်မြန်လုပ်လာပြီး.. သား..အား.. ဒေါ်လေး..အား..ပြီ..ပြီးတော့မေ… အား…ကောင်းလိုက်တာ…သား..သား..မြန်မြန်လုပ်ပေးတော့ ပြောကာ လုပ်နေတာကိုရပ်ပြီး ကျောခိုင်းကာ လက်ထောက်ပြီး နေပေတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နောက်ကနေဝင်တေ၊ ညီလေးကိုတေ့ကာ သူ့ခါးကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်သွင်းလိုက်ပြီး မြန်မြန်ကို ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တာ အချက် ၃၀လုပ်ပြီး သူပြီးသွားတေ။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးပြီးခါနီး ဆောင်ချက်တွေမြန်မြန် ဆောင့်လုပ်ပြီး အချက်၂၀ဆောင့်ပြီး ပြီးသွားတေ။ သူနှင့်အတူအိပ်ရာပေါ်မှာ ညီလေးကိုမထုတ်ဘဲ တပ်ပြီးမှေးနေလိုက်တော့တေ။ သူနှင့်မှေးနေရာက အမောပြေတော့ ညီလေးကိုထုတ်ပြီး ကုတင်ခြေရင်းက သူ့ရဲ့ညအိပ်ဂါဝန်နှင့် ညီလေးနှင့်သူ့ညီမလေးကို ညင်ညင်သာသာလေး သုတ်ပေးတေ။
သူက ကုတင်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားပြီး စားသောက်စရာတွေ ယူလာပြီး ခွံ့ကျွေးကာ သား.. သားလုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာဘဲ ဒေါ်လေးက သားလုပ်ပေးကို အရမ်းကြိုက်တေ စွဲသ်ားတာဘဲကွာ.. လို့ စားစရာတွေကို ခွံ့ကျွေးပြီး ပြောလာတေ။ သူ့လည်း စားသောက်ပြီး ယူလာတဲ့ပုဂံတွေကို ကုတင်ဘေးက ခုံပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီး ဗီဒိုထဲကနေ ဆေးပုလင်းထဲက ဆေးတစ်လုံးကိုတိုက်ကာ.. မင်းဦးလေးအတွက်.. ဒေါ်လေးက ဝယ်ထားတာ သူကတော့ ဒေါ်လေးကို လုပ်မပေးဘဲ တခြားဟာမတွေကို လုပ်နေတောလည်း ဒီဆေးကို သူနှင့်မတန်လို့ ဒီအတိုင်းသိမ်းထားတာကွ..ဟင်း..ဟင်း. ပြောပြီး ပုလင်းကိုထားကာ ကုတင်ပေါ်ကို ပြန်လာခဲ့တေ၊ သူလက်က အိပ်နေတဲ့ညီလေးကို ကိုင်ကာဆော့တော့ ညီလေးနိုးလာပြီး ခေါင်းက တရမ်းရမ်းနှင့် ဒေါသထွက်လာတေ။ သူက ညီလေးကို ကိုင်ဆော့နေတာ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့နုတ်ခမ်းနှင့်စုတ်ပေးလာတော့တေ။ သူက ကျွန်တော့ကို လှဲအိပ်စေပြီး ညီလေးကို သူ့လည်ချောင်းထိရောက်အောင်စုတ်ပေးပြီး သူက.. ဒေါ်လေး မနေ့က ဇတ်ကားထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးတာ ကောင်းရဲ့လား ..သား.. လို့ စုပ်ပေးတာကိုရပ်ပြီး။
လက်နှင့်ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း ပြောလာတေ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို ကြည့်ပြီး အရမ်းကောင်းပါတေ ဒေါ်လေးရယ် ဆွေမျိုးမေ့ပါဘဲဗျာ ပြောလိုက်တော့ သူက ပိုပြီး လုပ်ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကို ကောင်းပြီး ပြီးသွားမှာစိုးလို့ သူ့စုတ်ပေးတာကို ရပ်စေပြီး သူ့ကိုလည်း ပြန်ပြီး ပက်လက်အနေအထား နေစေတေ။ သူ့ပေါင်ကြားထဲကိုဝင်ပြီး သူ့ညီမလေးကို လက်ညိုနှင့်ထိုးလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးတေ။ သူရဲ့ အစေ့လေးကို သွားနှင့်မနာအောင် ခပ်ဖွဖွလေးကိုက်ပေးကာ တစ်ခါတစ်ခါ အစေ့လေးကို နုတ်ခမ်းနှင့် ဆွဲဆွဲကာ စုတ်ပေးလိုက်တေ။ သူလက်ကတော့ ကျွန်တော့ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ့ညီမလေးနှင့်ကပ်နေအောင် လုပ်ထားတေ။ အား.. သားရယ်… အရမ်းကောင်းတာဘဲကွာ..အား..ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာ..သားရယ်..အား.. ဒေါ်လေးကို..အား.. ရှီး..မြန်မြန်…အား..မြန်မြန်လုပ်ပေးပါတော့ကွယ်..အား.. လို့ပြောကာ ကျွန်တော့ရဲ့ခေါင်းကို ဆွဲကာ သူ့မျက်နှင့်ရှေ့ဆိုင်ဖြစ်အောင် ဆွဲတင်ပြီး ညီလေးကို သူ့လက်နှင့်ကိုင်ကာ သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူကအရမ်းလိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိပြီး။
မညှာဘဲ ပြင်းပြင်းဆောင့်လုပ်ကာ သူ့နို့တွေကိုတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပေးတေ။ သူကလည်း ပြန်ပြီး ကျွန်တော့လက်ကိုကိုင်ပြီး တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ အား… သားရယ်…အိုး…ရှီး.. ကောင်းတေ မြန်မြန်ဘဲ..အား.. အား… မြန်မြန်ဘဲ လုပ်ပေးပါ….အား… မရပ်နဲ့နော်..အား… မရပ်ပါနဲ့…အား… မြန်မြန်လုပ်ပေး.. အရမ်းကောင်း..တေ..အား.. ပြောပြီး ညီသံလေးနှင့် ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာကို အားပေးတေ။ ကျွန်တော်က သူစကားတွေကြားပြီး ပိုစိတ်ကြွကာ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ဆောင့်ပြီးကြမ်းတာ အခန်းထဲမှာ ဆူညံကုန်တေ ။ သူကလည်း အပေးကောင်းသလိုဘဲ ကျွန်တော်လို တက်သစ်စကောင်လေးကလည်း မြှောက်ပေးရင် ကြမ်းလိုက်တာက သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ရောဘဲ ။ သူ့ကိုကြမ်းကြမ်းဘဲ ဆောင်လုပ်တာ ၃မိနစ် အကြာမှာ သူက အား…သားရယ်.. ဒေါ်လေး..ပြီးချင်လာပြန်ပြီကွယ်..အား… ရှီး… မြန်မြန်ကွာ… အရမ်းကြိုက်တေ..အား.. ဒီအတိုင်ဘဲ…အား.. မြန်မြန်…အား.. မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ..အား… ပြောလာတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆောင့်လုပ်နေတာကို ရပ်လိုက်တော့။
အား.. ဘာလို့ရပ်တာလဲကွာ.. ဒီမှာကောင်းနေပြီ..။ပြောလာတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အဖြေမပေးဘဲ သူ့ကိုလေးဘက်ထောက် အနေအထားလေးနေစေတော့ သူသဘောပေါက်ကာ ပြုံးပြပြီး ကျွန်တော့ကို ဟင်း..ဟင်း.. အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲ… ပိုချစ်ပြီး..ပိုစွဲတာကွ ပြောပြီး ညီလေးကိုလက်နောက်ပြန်ကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ခါးကိုင်ပြီး တစ်ချက်တည်းနှင့် အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ခရေကိုလက်မလေးနှင့်မွှေရင်း တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် မြန်မြန် ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ ၂မိနစ်အကြာမှာ သူကအိပ်ရာခင်းတွေကို လက်တွေ ချေပြီး လက်သီးဆုပ်နေရာမှ ပြေလျောကာ ပြီးသွားတေ။ သူပြီးပေမဲ့ ကျွန်တော် အခုမှစပြီး ဖီလင်တက်တာမို့ သူရဲ့ဗိုက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးကိုဆင့်ပေးပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီကနေ ညီလေးကိုထုတ်ပြီး သူ့ညီမလေးဆီမှာ ရွှဲနေတဲ့အရည်တွေ လက်မလေးနှင့်သူ့ရဲ့ခရေမှာသုတ်လိုက်ပြီး ညီလေးကိုတေ့ကာ ဖြေးဖြေးလေးဘဲ သွင်းလိုက်တေ။ သူ့ရဲ့လက်ကနေ ညီလေး ၂ လက်မဝင်ပြီးမှတားကာ မောနေတဲ့ အသံလေးနှင့်…..။
သား.. ခဏ္ဏ.. အား..ရပ်ထားပါအုံးကွယ် လို့တားပြီး သူ့ကမောနေတဲ့ကြားမှ ခေါင်းလှည့်ကာ ပြောပြီး။သူရဲ့ခရေလေးကို အဆင်ပြေအောင် ရှုံ့ပွရှုံ့ပွကစားပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးမှ သူက သား… ဖြေးဖြေးလေးဘဲ.. လုပ်နော် ပြောပြီးပြီး အိပ်ရာခင်းကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး အံကြိတ်ကာပြောလာတေ။ သူက အဲ့လိုပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကိုလေးကို သူ့အပေါ်က မှောက်ချပြီးတော့ သူ့နားလေးကို သွားလေးနှင့်ခပ်ဖွဖွကိုက်ကာ လုပ်ပေးပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ညီလေးကို သွင်းလိုက်ပါတေ။ အဆုံးထိရောက်တော့မှ ခဏ္ဏရပ်ကာ သူ့ရဲ့နို့တွေကို လက်နှင့် ဆုပ်နယ်ကာ သူ့ရဲ့ခံစားမူရသကို မြင့်တင်ပေးကာ လုပ်ပေးပါတေ။ သူအဆင်ပြေပြီး စိတ်တွေကြွကာ သူခရေလေး အဆင်ပြေလာမှဘဲ ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ပေးပါတေ။ သူစိတ်တွေကြွပြီး နောက်ထပ်တဖန် သူက သား..အား..အန်တီ.. အဆင်ပြေပါပြီ..အား..သားလုပ်တော့.. လို့ ပြေ.လာတော့မှ ကျွန်တော်လည်းလည်း သူနားရွှက်ကို သွားနှင့်သူ့ရဲ့နားနှင့်ပါးကို နမ်းပေးပြီး ပုံမှန်လေးလုပ်ကာပေးလိုက်တေ။
သူဟာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြီးမှဘဲ ကျွန်တော်လည်း သူ့ခါးကိုကိုင်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပြီး ပြီးသွားတေ။သူ့အပေါ် မှောက်ချကာဘဲ သူ့အပေါ်ကထက်ရက် အမောဖြေပြီး နေလိုက်ပါတော့တေ။ ဒေါ်လေးချိုရဲ့အိမ်က ည ၉ နာရီမှ ပြန်လာခဲ့ပါတေ။ လူကနုံးချိနေတော့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တာနှင့် ရေချိုးထမင်းစားပြီး တန်းပြီးအိပရာဝင်ကာ အိပ်ရာဝင်ကာ အိပ်လိုက်ပါတော့တေ။.မာယာတို့လည်း တောင်ကြီးက ပြန်လာတော့ ပုသိမ်ကနေ ကျွန်တော့မိဘတွေကို ခေါ်ကာ ကျွန်တော်နှင့်မာယာရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် ညိနိုင်းကာ ရက်မြတ်ကိုရွှေးပြီး ရက်ကို သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့တေ။….. ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကျွန်တောရဲ့ ယောက္ခမနှင့်တကွ ကျွန်တောရဲ့ အချစ်တော်အဒေါ်တွေနှင့် အန်တီဖြူတို့က ကြွရောက်လာပြီး ပျော်ရွှင်စွာဘဲ ဆင်နွဲ့ကြကာ ကျွန်တော့ကို ချစ်ဇနီးကိုဂရုစိုက်ပြီး အသစ်လေးမြည်းချင်ရင် အခြားလူတွေကို မရွှေးဘဲ သူတို့ကို ရွှေးချယ်ဖို့ နားမှာကပ်ပြောကြပါလေတော့သည် ………..ပြီးပါပြီ။
အလုပ်မှအငြိမ်းစားယူပြီး…စား..ဝတ်….နေရေး အစဉ်မပြေသော… ဦးသောင်းခန့်သည်… မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် စေတီတစ်ဆူတွင်… လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အလုပ်ရှိလေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် စဉ်…စိတ်တူ….ကိုယ်တူ ပြောဆိုမွုအဆင်ပြေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွေ့ဆုံရသလို… အထက်ဖါး….အောက်ဖိ… ဂုန်းဆင်းဘီးတပ်… နောက်ကျောဓါး ဖြစ်ထိုးသည့်သူများနှင့်လည်း… တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ ကြည်စရာကြည်ပြာလေးများဖြစ်သော… ချိုချို၊ ခက်မာနွေး၊ အေးသီတာသိမ့်တို့ဖြစ်လည်း… ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအလုပ်တွင်… ဦးသောင်းခန့် မမြဲခဲ့ချေ ။ အောက်ခြေဝန်ထမ်းအချင်းချင်း… ညီညွတ်မျှတမွု မရှိသဖြင့်… ၄….၅လ,အကြာတွင်… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်ထွက်လိုက်လေတော့သည်။ ဦးသောင်းခန့် လင်မယားတွင် ငိုစား….ရယ်စား… ရတာနာလေးများ လည်းမရှိသည့်အတွက်…ရရှိသည့်… ပင်စင်လစာလေးဖြင့်… ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းကြသည်။ များမကြာမီ… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်… စေတီတွင်ဘုရားပွဲ တော်ကျင်းပလေသည်။ လင်မယားနှစ်ဦးတည်းသာနေထိုင်… ဦးသောင်းခန့်၏ နေအိမ်တွင်… ဦးသောင်းခန့်တစ်ဦးတည်း… အထီးကျန်နေသည်။ ဦးသောင်းခန့်၏ […]
အောင် ..မင်းနဲ့ငါ ထပ်တွေ့စရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး…. မမရိန်ရဲ့စကားလုံးတွေက ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်သွားစေပါတယ် ။ “ မမ…ကျနော့်ကို ဒင်နာစားဖို့ ခေါ်တာကကော အက်ဆီးဒင့်ဘဲလားဟင်……” “ အိုကွယ်…မင်း ထင်ချင်ရာထင်….မတော်တဆဖြစ်သွားတာ..အက်ဆီးဒင့်.ဖြစ်သွားတာ…..လူဆိုတာ အမှားမကင်းဘူး… တသက်တခါ မှားသွားတာလေးတွေ ရှိကြတာပေါ့…ကဲ…မင်း…မမ ကို မေ့လိုက်တော့….” မမရိန် သည် အောင့်ကို ကျောခိုင်းပြီး အပြေးကလေး ထွက်သွားတယ် ။ အောင် တပ်မက်ခဲ့ရတဲ့ ထွာဆိုင်ခါးလေဲး့ အောက်က လှလွန်းတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တုန်ခါသွားတာ ကို အောင် ရင်နာနာနဲ့ ငေးရင်း ကျန်ခဲ့တယ် ။ မမနဲ့ အောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးမှာ မမဘဲ ဇာတ်ညွှန်းရေး..မမဘဲ ဒါရိုက်တာ..မမဘဲ သရုပ်ဆောင် သွားတာပါ….အောင့်မှာတော့ အရူးကို အမဲသား ကျွေးမိလိုက်တာမျိုး….မမ….မမ….နဲ့ […]
သာယာကြည်လင်တဲ့ မနက်ခင်း လေးရဲ့အေးမြတဲ့လေညင်းလေးတွေနဲ့အတူသားသားတစ်ယောက် နိုးထလာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာတစ်ပတ်တိတိရှိပြီလေ။ ဖေဖေရယ်မေမေရယ်တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း ၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော့ကျွန်တော့်ဘေးကအခန်းမှာပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ လူတွေလဲသွားလာလို့ မနက်ခင်းလေးကသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ အိပ်ရာထဲမှာဟိုဒီတွေနေရင်းနဲ့ အခန်းအပြင်ကမေမေအသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ခဏဆိုမနက်စာစားပြီးဖေဖေ စက်ရုံသွားတော့မယ်လေ။ မေမေလဲဆိုင်သွားတော့မှာဆ်ိုတော့အိမ်မှာမမရယ်ကျွန်တော်ရယ်ညီမလေးရယ်သုံးယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကများတယ်။ မမက မေမေ အမရဲ့သမီးပေါ့ ငယ်ငယ်ထဲကမိဘတွေမရှိတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေပဲသမီးလေးလိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလေ။ အခုဆို မမက နှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျွန်တော်က နှစ်ဆယ့်သုံး ၊ညီမလေးက ဆယ့်ကိုး ရှိပြီပေါ့။ အားလုံးငယ်ငယ်ထဲကသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းပါပဲ ချစ်လဲ ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အောက်အလွှာမှာတော့ မေမေမောင်အငယ်တို့လင်မယားနေကြတယ်လေ။ ဒီလိုနေလာကြရင်းနဲ့ တစ်နေ့ပေါ့မေမေအကိုအကြီးဆုံးကဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူလျှောက်ပေးထားတဲ့ ဂရီး ကဒ် ကရပြီတဲ့လေ။ အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာလဲတစ်မျိုးပြောင်းစဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ သူတို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာလေ။ ဖြစ်ရဲ့လားပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့သွားဖြစ်ပါတယ် သူတို့အရင်သွားကြည့်မယ် ညီမလေးကနှစ်ဆယ့်တစ် နှစ်မကျော်သေးတော့လိုက်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလာခေါ်မယ်ပေါ့။ အဲ့လို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမသုံးယောက်နေလာကြတာ သုံးလေး လလောက်ရှိလာတဲ့တစ်နေ့ပေါ့၊ အဲ့ဒီနေ့ကညီမလေးမွေးနေ့လေ ။အိမ်မှာ ပါတီလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လုပ်ပေးရတယ်။ […]